Search သူရဲ​ကောင်းတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ - GenFK.com
Search Results - သူရဲ​ကောင်းတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ
wifi သုံး​နေတုန်း down လိုက်​တဲ့ ကား​လေးက ဒီ​လောက်​ထိ​ကောင်းမယ်​ မထင်​ထားဘူး ဆယ်​မိနစ်​ မပြည့်​ခင်​ပဲ ဇာတ်​က စိတ်​၀င်​စားမှု အထွဋ်​အထိပ်​ ကို ဆွဲ​ဆောင်​သွားပါတယ်​ 💙 ထွက်​ထားတာ ​တော်​​တော်​ကြာ​နေပါပြီ ဒါ​ပေမဲ့ ကိုယ်​​တွေလို ခုမှ ကြည့်​ရတဲ့သူ​တွေ အတွက်​​တော့ အသစ်​​ပေါ့ 💙 ကားနာမည်​​လေးလဲ မသိဘူး ကိုယ်​က​တော့ Beyond Rangoon, In August 1988 လို့ပဲ ​ခေါ်လိုက်​မယ်​​နော်​ 💙 ဇာတ်​​လမ်းေ​လးက အ​မေရိကန်​ ဆရာဝန်​ အမျိုးသမီး ​လော်​ရာဘိုးမန်း ရဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ မိသားစု ​အ​ကြောင်း​လေးနဲ့ အစပြုထားတယ်​ ​နောက်​​တော့ သူ့အမ နဲ့ သူ ရန်​ကုန်​ကို ​ရောက်​လာတယ်​ ညဖက်​တည်းခိုခန်းမှာအိပ်​​နေတုန်း လူစု​အော်​သံကြားလို့ ထကြည့်​​တော့ ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်​​နေတယ်​ သူက အသံကြားရာဆီ​ပြေးလိုက်​ခဲ့တယ်​ မြန်မာ​စစ်​သား​တွေ ​လဲ ​စောင့်​​နေရင်း​ပေါ့ အဲ့ချိန်​မှာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​ခေါင်း​ဆောင်​တဲ့ အဖွဲ့​တွေ​ရောက်​လာတယ်​ အဲ့အခန်း​လေး​တော်​​တော်​အားရတယ်​ မ​ပြောပြဘူး ကိုယ့်​ဘာသာ ကြည့်​...... ​အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ​လော်​ရာတို့ ရန်​ကုန်​က​နေပြန်​ရမဲ့အ​ခြေအ​နေ​ရောက်​လာတယ်​ မနက်​ထွက်​မဲ့​လေယာဉ်​နဲ့ ဘန်​​ကောက်​ကို ပြန်​ဖို့လုပ်​​တော့ သူ့မှာ passport မရှိတာရယ်​ မ​နေ့ညက ကိစ္စနဲ့ညှိတယ်​လို့လဲထင်​တာပဲ အဲ့မှာ ​လော်​ရာက ​နေခဲ့ရတယ်​ သူ့အမက​တော့ အတန်​တန်​မှာရင်း ​လေယာဉ်​​ပေါ်တက်​သွားခဲ့တယ်​........ အဲ့ဒီကစပြီး ဇာတ်​လမ်းက စ မိုက်​​တော့တာပဲ သူ ​လေဆိပ်​ကထွက်​လာ​တော့ ​ပါ​မောက္ခ​ဟောင်း Tourist guide ​အောင်​ကို ဆိုတဲ့ သူ နဲ့ စ​တွေ့ခဲ့တယ်​ ခရီးထွက်​ကြရင်း အ​ရေးခင်းနဲ့ကြုံတယ်​ အခက်​ခဲ​တွေ အမျိုးမျိုး​တွေ့ခဲ့တယ်​ တိုင်းတစ်​ပါးသူ ဖြစ်​​နေ​ပေမဲ့ စိတ်​ထား​လေး​တော်​​တော်​ချစ်​ဖို့​ကောင်းတာ ​တွေ့ရတယ်​ သူ လွတ်​သွားဖို့ ငါးစာအ​နေနဲ့ ကျန်​ခဲ့​ပေးတဲ့ ​အောင်​ကို ကို မထားခဲ့ရက်​ဘူး သူငယ်​ချင်း​ကောင်း ပီသစွာ ပြန်​လာ​ခေါ်ပြီး ​ပြေးကြတယ်​ ​အောင်​ကို ​သေနတ်​မှန်​တယ်​ ရ​အောင်​ ရုန်းထွက်​ကြတယ်​ စိတ်​ဓာတ်​ကျတယ်​ အချင်းချင်းအား​ပေးကြတယ်​ ​ရှေ့ဆက်​ကြတယ်​ စိတ်​တူတဲ့သူ​တွေနဲ့လဲ ​တွေ့​တော့ အတူ​ရှေ့ဆက်​ ကြိုးစားခဲ့ကတယ်​ ​နောက်​ဆုံးပိုင်းနားမှာ ထိုင်းနယ်​စပ်​ကို အသက်​လု​ပေးကြရင်း တံတား​တွေဖြတ်​​ပြေးတဲ့ချိန်​ စစ်​သား​တွေကလဲ ဗုံးခွဲ​နေတဲ့ချိန်​ ဒဏ်​ရာရ​နေတဲ့ ​အောင်​ကို ကို လွတ်​​မြောက်​​နေပြီဖြစ်​တဲ့ ​လော်​ရာက တစ်​ဖက်​ကမ်းက​နေ ​အောင်​ကို ​အောင်​ကို ဆိုပြီး မပီတပီ​ခေါ်ပြီး အား​ပေး​နေတဲ့အသံ ​ပျော်​ရွှင်​​နေတဲ့အသံ​လေးက မျက်​ရည်​၀ဲ​စေတယ်​ ကျန်​တာက​တော့ ဆက်​ကြည့်​ရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်အ​တွေး​လေးနဲ့ကိုယ်​ ဒီကား​လေးရဲ့အရသာကို ခံစား​စေချင်​တယ်​.......... ဒီကား​လေးမှာ မြင်​ရတာ​တွေက ကိုယ်​တိုင်​ မ​တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ၈၈ အ​ရေးခင်း စစ်အာဏာရှင်ေ​​တွရဲ့ ရက်​စက်​မှု​တွေကို ကြက်​သီးထ​လောက်​​အောင်​ မြင်​​တွေ့ရလိမ့်​မယ်​ ပြည်​သူ​တွေ အချင်းချင်း​ပြောကြတဲ့ ``ပစ်​မိန့်​​ပေးလိုက်​ပြီ´´ ဆိုတဲ့ အသံ​တွေက ​တော်​​တော်​၀မ်းနည်းဖို့​ကောင်းတယ်​ မိသားစု​တွေ ရှင်ကွဲ ​သေကွဲ ကွဲကြတယ်​ စစ်​သား​တွေ ကိုယ်​တိုင်​က ယုတ်​မာလို့ပစ်​တာရှိသလို အထက်​အမိန့်​​ကြောင့်​ ပစ်​တဲ့သူ​တွေလဲပါတယ်​ << အဲ့ဒီ သ​ဘောကိုေ​တာ့ ​သေချာနားမလည်​ဘူး ရှုပ်​​ထွေးလို့ ဒီကြားထဲ မြန်​မာအချင်းချင်း ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​မရှိတဲ့သူ​တွေကိုလဲ ​တွေ့ရတယ်​ ........ အ​ကောင်းဖက်​က ကြည့်​ရင်​​တော့ အဲ့​ခေတ်​ရဲ့ အသွင်​အပြင်​ အ​ငွေ့အသက်​ ဓ​လေ့​တွေ ပြန်​​တွေ့ရတယ်​ အင်္ဂလိပ်​လို ​ပြောတတ်​ကြတာ​တွေက​တော့ အထင်​ကြီးပြီး ချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​ ​လေးစားစရာ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်​တဲ့စိတ်​ထား​လေး​တွေကိုလဲ က​လေး​တွေမှာက အစ​တွေ့ရတယ်​.......... ဒါက​တော့ ကိုယ့်​အမြင်​ကို ​ရေးထားတာဆို​တော့ အဖက်​ဖက်​က သ​ဘောထားကွဲလွဲမှု​တွေရှိနိုင်​လို့ အမှားပါရင်​ ခွင့်​လွှတ်​​ပေးကြပါလို့😁 အဆင်​​ပြေရင်​ Like & Share ​လေးလုပ်​​ပေးခဲ့ပါဦး😁 ​ဟောင်း​ပေမဲ့ ​ကောင်း​နေဆဲကား​လေး​တွေ အချစ်​ အမုန်း ကလဲ့စား ဟာသ ​မေတ္တာဖွဲ့ကား​တွေ ကာတွန်းကား အသစ်​ထွက်​တာ​တွေ နဲ့ မျိုးတူစုထား​ပေးတာ​တွေ အစုံ ကြည့်​ချင်​တယ်​ ဆိုရင်​​တော့ acc ​လေးကို follow လုပ်​ထားပါ​နော်​ 💙 #Kyitharoo 💙
wifi သုံး​နေတုန်း down လိုက်​တဲ့ ကား​လေးက ဒီ​လောက်​ထိ​ကောင်းမယ်​ မထင်​ထားဘူး ဆယ်​မိနစ်​ မပြည့်​ခင်​ပဲ ဇာတ်​က စိတ်​၀င်​စားမှု အထွဋ်​အထိပ်​ ကို ဆွဲ​ဆောင်​သွားပါတယ်​ 💙 ထွက်​ထားတာ ​တော်​​တော်​ကြာ​နေပါပြီ ဒါ​ပေမဲ့ ကိုယ်​​တွေလို ခုမှ ကြည့်​ရတဲ့သူ​တွေ အတွက်​​တော့ အသစ်​​ပေါ့ 💙 ကားနာမည်​​လေးလဲ မသိဘူး ကိုယ်​က​တော့ Beyond Rangoon, In August 1988 လို့ပဲ ​ခေါ်လိုက်​မယ်​​နော်​ 💙 ဇာတ်​​လမ်းေ​လးက အ​မေရိကန်​ ဆရာဝန်​ အမျိုးသမီး ​လော်​ရာဘိုးမန်း ရဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ မိသားစု ​အ​ကြောင်း​လေးနဲ့ အစပြုထားတယ်​ ​နောက်​​တော့ သူ့အမ နဲ့ သူ ရန်​ကုန်​ကို ​ရောက်​လာတယ်​ ညဖက်​တည်းခိုခန်းမှာအိပ်​​နေတုန်း လူစု​အော်​သံကြားလို့ ထကြည့်​​တော့ ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်​​နေတယ်​ သူက အသံကြားရာဆီ​ပြေးလိုက်​ခဲ့တယ်​ မြန်မာ​စစ်​သား​တွေ ​လဲ ​စောင့်​​နေရင်း​ပေါ့ အဲ့ချိန်​မှာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​ခေါင်း​ဆောင်​တဲ့ အဖွဲ့​တွေ​ရောက်​လာတယ်​ အဲ့အခန်း​လေး​တော်​​တော်​အားရတယ်​ မ​ပြောပြဘူး ကိုယ့်​ဘာသာ ကြည့်​...... ​အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ​လော်​ရာတို့ ရန်​ကုန်​က​နေပြန်​ရမဲ့အ​ခြေအ​နေ​ရောက်​လာတယ်​ မနက်​ထွက်​မဲ့​လေယာဉ်​နဲ့ ဘန်​​ကောက်​ကို ပြန်​ဖို့လုပ်​​တော့ သူ့မှာ passport မရှိတာရယ်​ မ​နေ့ညက ကိစ္စနဲ့ညှိတယ်​လို့လဲထင်​တာပဲ အဲ့မှာ ​လော်​ရာက ​နေခဲ့ရတယ်​ သူ့အမက​တော့ အတန်​တန်​မှာရင်း ​လေယာဉ်​​ပေါ်တက်​သွားခဲ့တယ်​........ အဲ့ဒီကစပြီး ဇာတ်​လမ်းက စ မိုက်​​တော့တာပဲ သူ ​လေဆိပ်​ကထွက်​လာ​တော့ ​ပါ​မောက္ခ​ဟောင်း Tourist guide ​အောင်​ကို ဆိုတဲ့ သူ နဲ့ စ​တွေ့ခဲ့တယ်​ ခရီးထွက်​ကြရင်း အ​ရေးခင်းနဲ့ကြုံတယ်​ အခက်​ခဲ​တွေ အမျိုးမျိုး​တွေ့ခဲ့တယ်​ တိုင်းတစ်​ပါးသူ ဖြစ်​​နေ​ပေမဲ့ စိတ်​ထား​လေး​တော်​​တော်​ချစ်​ဖို့​ကောင်းတာ ​တွေ့ရတယ်​ သူ လွတ်​သွားဖို့ ငါးစာအ​နေနဲ့ ကျန်​ခဲ့​ပေးတဲ့ ​အောင်​ကို ကို မထားခဲ့ရက်​ဘူး သူငယ်​ချင်း​ကောင်း ပီသစွာ ပြန်​လာ​ခေါ်ပြီး ​ပြေးကြတယ်​ ​အောင်​ကို ​သေနတ်​မှန်​တယ်​ ရ​အောင်​ ရုန်းထွက်​ကြတယ်​ စိတ်​ဓာတ်​ကျတယ်​ အချင်းချင်းအား​ပေးကြတယ်​ ​ရှေ့ဆက်​ကြတယ်​ စိတ်​တူတဲ့သူ​တွေနဲ့လဲ ​တွေ့​တော့ အတူ​ရှေ့ဆက်​ ကြိုးစားခဲ့ကတယ်​ ​နောက်​ဆုံးပိုင်းနားမှာ ထိုင်းနယ်​စပ်​ကို အသက်​လု​ပေးကြရင်း တံတား​တွေဖြတ်​​ပြေးတဲ့ချိန်​ စစ်​သား​တွေကလဲ ဗုံးခွဲ​နေတဲ့ချိန်​ ဒဏ်​ရာရ​နေတဲ့ ​အောင်​ကို ကို လွတ်​​မြောက်​​နေပြီဖြစ်​တဲ့ ​လော်​ရာက တစ်​ဖက်​ကမ်းက​နေ ​အောင်​ကို ​အောင်​ကို ဆိုပြီး မပီတပီ​ခေါ်ပြီး အား​ပေး​နေတဲ့အသံ ​ပျော်​ရွှင်​​နေတဲ့အသံ​လေးက မျက်​ရည်​၀ဲ​စေတယ်​ ကျန်​တာက​တော့ ဆက်​ကြည့်​ရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်အ​တွေး​လေးနဲ့ကိုယ်​ ဒီကား​လေးရဲ့အရသာကို ခံစား​စေချင်​တယ်​.......... ဒီကား​လေးမှာ မြင်​ရတာ​တွေက ကိုယ်​တိုင်​ မ​တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ၈၈ အ​ရေးခင်း စစ်အာဏာရှင်ေ​​တွရဲ့ ရက်​စက်​မှု​တွေကို ကြက်​သီးထ​လောက်​​အောင်​ မြင်​​တွေ့ရလိမ့်​မယ်​ ပြည်​သူ​တွေ အချင်းချင်း​ပြောကြတဲ့ ``ပစ်​မိန့်​​ပေးလိုက်​ပြီ´´ ဆိုတဲ့ အသံ​တွေက ​တော်​​တော်​၀မ်းနည်းဖို့​ကောင်းတယ်​ မိသားစု​တွေ ရှင်ကွဲ ​သေကွဲ ကွဲကြတယ်​ စစ်​သား​တွေ ကိုယ်​တိုင်​က ယုတ်​မာလို့ပစ်​တာရှိသလို အထက်​အမိန့်​​ကြောင့်​ ပစ်​တဲ့သူ​တွေလဲပါတယ်​ << အဲ့ဒီ သ​ဘောကိုေ​တာ့ ​သေချာနားမလည်​ဘူး ရှုပ်​​ထွေးလို့ ဒီကြားထဲ မြန်​မာအချင်းချင်း ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​မရှိတဲ့သူ​တွေကိုလဲ ​တွေ့ရတယ်​ ........ အ​ကောင်းဖက်​က ကြည့်​ရင်​​တော့ အဲ့​ခေတ်​ရဲ့ အသွင်​အပြင်​ အ​ငွေ့အသက်​ ဓ​လေ့​တွေ ပြန်​​တွေ့ရတယ်​ အင်္ဂလိပ်​လို ​ပြောတတ်​ကြတာ​တွေက​တော့ အထင်​ကြီးပြီး ချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​ ​လေးစားစရာ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်​တဲ့စိတ်​ထား​လေး​တွေကိုလဲ က​လေး​တွေမှာက အစ​တွေ့ရတယ်​.......... ဒါက​တော့ ကိုယ့်​အမြင်​ကို ​ရေးထားတာဆို​တော့ အဖက်​ဖက်​က သ​ဘောထားကွဲလွဲမှု​တွေရှိနိုင်​လို့ အမှားပါရင်​ ခွင့်​လွှတ်​​ပေးကြပါလို့😁 အဆင်​​ပြေရင်​ Like & Share ​လေးလုပ်​​ပေးခဲ့ပါဦး😁 ​ဟောင်း​ပေမဲ့ ​ကောင်း​နေဆဲကား​လေး​တွေ အချစ်​ အမုန်း ကလဲ့စား ဟာသ ​မေတ္တာဖွဲ့ကား​တွေ ကာတွန်းကား အသစ်​ထွက်​တာ​တွေ နဲ့ မျိုးတူစုထား​ပေးတာ​တွေ အစုံ ကြည့်​ချင်​တယ်​ ဆိုရင်​​တော့ acc ​လေးကို follow လုပ်​ထားပါ​နော်​ 💙 #Kyitharoo 💙 Kýì Tĥär Øö 12 Jun 2020 · 18K views
★ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း လမ်းမတွေပေါ်မှာ ချီတက်ဆန္ဒပြရင်း သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♫ ♪ ♫ ♪… ★ ကမ္ဘာမကြေဖူး ★ … ♫ ♪ ♫ ♪ တေးရေး၊ နိူင်မြန်မာ * ကမ္ဘာမကြေဖူး… ♫ ♪ ♫ ♪… ငါတို့ တစ်တွေရဲ့ သွေးနဲ့ ရေးတဲ့ မော်ကွန်းတွေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪… * တော်လှန်ရေး …… ♫ ♪ ♫ ♪… ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော အော် .… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ ရေ … ♫ ♪ ♫ ♪… အာဇာနည်တွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည် … ♫ ♪ ♫ ♪… ရဲရဲတောက် ဒို့ပြည်သူတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… * သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း …… ♫ ♪ ♫ ♪… ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီး အဖိုးရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… * သခင်အောင်ဆန်း … နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဖရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… အော် .. လုပ်ရက်ကြပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ ပြည်သူ့ အလောင်းတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… အတုံးအရုံး လဲပြိုကာနေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪… * ညီအစ်ကိုတို့… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ စီးတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪… မတွေဝေနဲ့…… ♫ ♪ ♫ ♪…. ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪… အော် …… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊ * ညီအစ်ကိုတို့…… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ ကျတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪… မတွေဝေနဲ့….… ♫ ♪ ♫ ♪… ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪… သြော် … သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊ အမျိုးချစ်တဲ့ ဒို့ တာဝန်ပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… ကမ္ဘာမကြေဖူး …… ♫ ♪ ♫ ♪…… ♫ ♪ ♫ ♪… ။ CRD ; Zaw Win
★ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း လမ်းမတွေပေါ်မှာ ချီတက်ဆန္ဒပြရင်း သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♫ ♪ ♫ ♪… ★ ကမ္ဘာမကြေဖူး ★ … ♫ ♪ ♫ ♪ တေးရေး၊ နိူင်မြန်မာ * ကမ္ဘာမကြေဖူး… ♫ ♪ ♫ ♪… ငါတို့ တစ်တွေရဲ့ သွေးနဲ့ ရေးတဲ့ မော်ကွန်းတွေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪… * တော်လှန်ရေး …… ♫ ♪ ♫ ♪… ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော အော် .… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ ရေ … ♫ ♪ ♫ ♪… အာဇာနည်တွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည် … ♫ ♪ ♫ ♪… ရဲရဲတောက် ဒို့ပြည်သူတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… * သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း …… ♫ ♪ ♫ ♪… ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီး အဖိုးရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… * သခင်အောင်ဆန်း … နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဖရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… အော် .. လုပ်ရက်ကြပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ ပြည်သူ့ အလောင်းတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… အတုံးအရုံး လဲပြိုကာနေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪… * ညီအစ်ကိုတို့… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ စီးတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪… မတွေဝေနဲ့…… ♫ ♪ ♫ ♪…. ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪… အော် …… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊ * ညီအစ်ကိုတို့…… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ ကျတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪… မတွေဝေနဲ့….… ♫ ♪ ♫ ♪… ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪… သြော် … သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊ အမျိုးချစ်တဲ့ ဒို့ တာဝန်ပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… ကမ္ဘာမကြေဖူး …… ♫ ♪ ♫ ♪…… ♫ ♪ ♫ ♪… ။ CRD ; Zaw Win Golden Man 8 Aug 2018 · 97 views
မတင်တာကြာလို့ အမုန်းကြည့်လိုရအောင်တင်လိုက်ပြီ ကြည့္က်စမ်း သိုင်းစီးရီး (၂၀၀)ကေ်ာ်အဝကြည့် 😋 +++++++--------------+++++++ AccလေးကိုFollow လုပ္ထားပါ 😍 ****************************************** ရေဆန္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918643188375815/?substory_index=0 မ်က်ရည္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918886241684843/?substory_index=0 မွော်ဝင္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182287888678009/ အံ့ဖြယ္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2174729982767133/ ဝိညာဉ်ခြေမယ့္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1932436730329794/ ပေ်ာက်ဆုံးနေသာဝရဇိန္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2262166060690191/ စစ်သူရဲကောင်းနဲ့ရွှေရာင္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1923134694593331/?substory_index=0 သိုင်းလောကပန်းခ်ီနဲ့နဂါးဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2297739193799544/ ဝိညာဉ်ေခြေတေဇာဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2232898426950288/ ဓားဘုရင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226212937618837/ ဓားပ်ံသိုင်းသူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169904239916374/ သိုင်းလောကမုန္တိုင်း ပတြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2181192475454217/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351798449108751&id=100028357959789 သိုင်းလောကမုန္တိုင်း ဒုတြဲ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351811852440744&id=100028357959789 ခ်င် ဒဏ္ဍာရီထဲကဓားမင်းသခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169203073319824/ ကံကြမ္မာလွည့္ဖ်ားရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2204719753101489/ တော်ဝင်အကြံပေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2227746244132173/ နွင်းနဂါးသိုင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919258534980947/?substory_index=0 ငါးကေလး https://www.facebook.com/100028357959789/posts/388232105465385/ မြိုင်ဟေဝန္ကသိုင်းလုလင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2302453779994752/ ဘက္မတူတဲ့တက္လူ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929355083971292/ ငြေအဆင်းနဲ့သမီးတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2281744045399059/ နွင်း‌‌မျွေ္စာင္မွသိုင်းသခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2264455943794536/ ထူးဆန်းထြေလာမွုခင်းကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2235861966653934/ ငြိုးမာန္ဖြဲ့ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226250344281763/ ရွှေမင်းသမီးအားနွုတ်ဆက်ျခင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226235380949926/ တော်ဝင်သစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2230316297208501/ ပညာရွိမေလးလုက်ိမ်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2202528776653920/ https://www.facebook.com/100028357959789/posts/387475585541037/ Princess agent https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1956707834569350/?substory_index=0 မီးလျွံကြားကဧကရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171493643090767/ ဧကရီဝေရန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170473936526071/ ဒဏ္ဍာရီထဲကခ်စ်မေတ္တာ ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2184761495097315/ ခ်စ်သောမင်းကြီး ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170312509875547/ ပ်ားရည္လွှမ်းတဲ့ခ်စ်မေတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2192073961032735/ ကြယ္စင္နတ်သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172515366321928/ မိုးကုပ္စက်ဝိုင်းထိခ်စ်ျခင်းတရားစီသို့ 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171909079715890/ မောင့္ခ်စ်သည်းဧကရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171045153135616/ ခ်စ်ကြမ္မာစေခိုင်းရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2338749813031815/ စစ်ျေမျပင္ကခ်စ်တေးကဗ်ာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2174476602792471/ မဟူရာလွှမ်းတဲ့သိုင်းကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2175064456067019/ မျြေဖူမေလးရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2244976009075863/ မျြေဖူမေလးရဲ့ကံကြမ္မာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171975389709259/ လြီပုနဲ့သောင်းခ်န် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2203884199851711/ The Four https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182439558662842/ အေမွာင္ထုရဲ့သခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2180761058830692/ အေမွာင်လောကရဲ့သိုင်းရာဇာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2303514423222021/ နဂါးညီနောင္နဲ့သြေးကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172662516307213/ Colourful bone https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2180667935506671/ Legend of Zu 1 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169170533323078/ Legend of zu ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2175546292685502/ ခ်စ္လွစြာသောအရွင် ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172008299705968/ သိုင်းမင်းသားနဲ့အေဆာင္နတ်သမီး 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171675419739256/ The legend of Dugu https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171670426406422/ အေရွ့တိုင်းရဲ့အိုဒစ်ဆီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171525726420892/ မွေ္ပာန်းခ်ီထဲကျေမေခြးလုလင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171403969766401/ ဒဏ္ဍာရျီေမေခြး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169978396575625/ ခ်ယ်ရီသစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171040763136055/ သြေးရောင်ျခယ္တဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170286286544836/ မီးလျွံနတ်သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170283163211815/ ဧကရီဖူယောင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170278623212269/ နတ်သမီးလေးရဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170159109890887/ မက္မြန္ပန်းကေလးမ်ားပြင့္ထူးရာ သုံးဘဝ သုံးကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169992519907546/ မက္မြန္ပန်းကေလးရဲ့ကတိသစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2167997576773707/ Love 020 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169987529908045/ သစ္စာတရားရဲ့ဘက်တော်သားမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169984809908317/ ပန်းမိစ္ဆာနဲ့ဓားသူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169906009916197/ မွော်သတို့သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169983083241823/ ဝိညာဉ်ခြေဓားနွင့္မရဏစြမ်းအား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169982123241919/ မွော်ကြယ္ပြင့်လေးမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169179569988841/ တိမ္လွှာထက္ကတိုက္ပြဲအလင်္ကာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169177126655752/ တော်ဝင်သြေးစက္ကံကြမ္မာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169146843325447/ နတ်ဆေးဆရာမေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169095676663897/ သုခမြို့တ္မေွာအမုန်းတရားမီးလျွံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2164984007075064/ စောရဝိဇ္ဇာရွောင်ရိလန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1991294284444038/ ခေတ္တေခတ်၏သြေးနိဒါန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2342327179340745/ တန်မြို့တ္ကောတော်ဝင် ငတက်ျပား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2339019453004851&id=1914765652096902 Detective Dee https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2381274572112672/ The Journey of Flower https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918005735106227/?substory_index=0 The Legend of Dagger Lee https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918008211772646/?substory_index=0 ဝူတန်သိုင်းဆိုတာဒီလို https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2166911446882320/ ဝူတန်ရဲ့ဂန္တဝင်ရွှေဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918127061760761/?substory_index=0 Twins of Brother https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918237315083069/?substory_index=0 Legend of Dance https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918510451722422/?substory_index=0 The Myth https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918633545043446/?substory_index=0 သိမ်းဆည်းထားသောအခ်စ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365686547004808/ Princess Pearl https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365195397053923/ New my fair princess 2011 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365284403711689/ အနက်ရောင္တမန်တော် Guardian https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2352359628337500/ သူရဲကောင်းလေးဖော်နွင့်ရွေးဟောင်းမြို့တော်အတ္ထုပ္ပတ္တိ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2352335615006568/ သူရဲ‌ကောင်းဝူရွင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2340433362863460/ ဒဏ္ဍာရီဓားနွင့္နတ်ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2339263932980403/ မိဖုရားမယ်ရွပ်တေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2307298696176927/ သိုင်းကမ္ဘာမွထာဝရေမတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2306389459601184/ တော်ဝင်သြေးပန်းခ်ီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918754425031358/?substory_index=0 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1932777720295695/?substory_index=0 ဓားသြားအက္ခရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918887985018002/?substory_index=0 လျပည့်ညရဲ့ဓားကောက်ရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919242618315872/?substory_index=0 သူရဲကောင်းမေတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919250178315116/?substory_index=0 မာယာ‌‌သွေးကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919477361625731/?substory_index=0 သိုင်းမင်းသားနွင့္နတ္မိမယ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919720921601375/?substory_index=0 နက္ခတ္မွားတဲ့ဖူးစာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919833644923436/?substory_index=0 ပါဝါသိုင်းစိန်ခေါ်သံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919835708256563/?substory_index=0 အခ်စ်နွင့္တိုက္ပြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919871071586360/?substory_index=0 စိတ်ညှို့ရွင်နွင့်မွေ္နာဂါး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920039451569522/?substory_index=0 မိစ္ဆာခ်ိန်သီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920220821551385/?substory_index=0 ကေဝပ်ိုနဲ့နတ္စစ်သူကြီးသုံးပါး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1923867654520035/?substory_index=0 ကောင်းကင္တိုက္ပြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1924150987825035/?substory_index=0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351989782422951&id=100028357959789 သိုင်းမင်းသားနွင့်ဥဒေါင်းတောင္ပံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920416408198493/?substory_index=0 မရဏေက်ာ့ကြင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920425171530950/?substory_index=0 သြေးဇာတ္လမ်းရဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ္ပုဒ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920477428192391/?substory_index=0 ကြည်နူးဖြယ်ရာပ်ိုကညာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922617424645058/?substory_index=0 မာနရွင္ကိုလူခေ်ာနဲ့နတ္ဖက္တဲ့ဖူးစာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1928737317366402/ ‌ကောင်းကင်တောင္မွဓားသူရဲကောင်းခုနစ်ဖော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922984844608316/?substory_index=0 မိုျးေမစစ်သူကြီး https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1723533507943614&id=1623292764634356 ငြိုးသူကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2204809773092487/ စစ်သူရဲကောင်းတို့ခင်းတဲ့ဗ်ူဟာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1924522174454583/ အဆိပ္ဘုရင္နဲ့သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1925363504370450/ ပြိုင္ဘက္ကင်းသိုင်းသမား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1925410854365715/ လေလြင့်မြို့ရိုးမွဓားမုန္တိုင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1926686590904808/?substory_index=0 ကြယ္ပ်ံဥက္ကာဓားလိပ်ျပာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929355500637917/?substory_index=0 ဓားသြားထက္ကစိန်ခေါ်သံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929357807304353/?substory_index=0 မွော်သိုင်းကား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1931861097054024/ မိစ္ဆာရန္စယ်ြနွင့်မေတ္တာရွင္မေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1928105637429570/?substory_index=0 အိပ္မက်သူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2177571219149676/ Ice Fantasy 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922924637947670/?substory_index=0 လူငယ်ပေါင္ခ်ိန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929356593971141/?substory_index=0 လူငယ်ပေါင္ခ်ိန် တတြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929357220637745/?substory_index=0 ပေါင္ခ်ိန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171842999722498/ ငါးနီမေလးနဲ့ပုလဲဆံထိုးလူသတ္မွု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182285362011595/ က်ိကုန်းကိုယ်တော် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314915986130331&id=100028357959789 အာစရိဂုဏ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1937581056482028/?substory_index=0 ထင်ရာစိုင်းတဲ့ဓားသြား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1938149583091842/ Empires and me https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2251834175056713/ အိမ်ရွေ့စံမင်းသမီးလေးရဲ့ကြင်ယာတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2257113944528736/ စြန်းဝူခုံးနဲ့မွော်ဝင်ကြာပန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2256595974580533/ စြန်းဝူခုံးနဲ့မွော်ဝင္ဓာတ္လုံး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170881856485279/ စြန်းဝူခုံးနွင့်အေနာက္ဖက်သို့အခ်စ္မ်ားနဲ့ခရီးနွင်ျခင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171506663089465/ အေနာက်သို့ခရီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170881139818684/ ပင္လယ်ပေ်္မာင်းသားနွင့် အသက်ဆက်သတို့သမီး 1 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2239035329669931/ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171927213047410/ နဂါးညီနောင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170266006546864/ စစ်သူကြီး မူလန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1965915890315211/ နတ္ဓားရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1940919369481530/ သစ္ခြအရွင်သခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1940846632822137/ လေပြမိန်းကေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2211542709085860/ သင်းရနံ့တို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2206534419586689/ သိုင်းဝိညာဉ်နွင့္ခ်စ်သူလိပ်ျပာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2206106919629439/ လနတ်သမီးနဲ့လေးညှို့ရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2194408794132585/ ကြောင္ကေလးရဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2194213557485442/ ရာဇဝင္ထဲကသူမ ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2179994215574043/ ဂြိုဟ်သူမေလးရဲ့ခ်စ်သူ ပ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2179727852267346/ ဂြိုဟ်သူမေလးရဲ့ခ်စ်သူ ဒု https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315042666117663&id=100028357959789 ထူးဆန်းသောကံကြမ္မာနဲ့ဘုရင်ျဖစ်ရတဲ့ဒုက္ခ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172039226369542/ ဒဏ္ဍာရီထဲကခ်စ္ပန်းမာယာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2240392856200845/ ဝိညာဉ်ေခြေတေဇာဓား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232898426950288&id=1914765652096902 ငြိုးမာန္ဖြဲ့ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226250344281763/ သိုင်းကမ္ဘာမွထာဝရေမတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2306389459601184/ ခေတ္တေခတ်၏သြေးနိဒါန်း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2342327179340745&id=1914765652096902 ဇာမဏီငွက္တို့ရဲ့ပျုံပင် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2305827129657417&id=1914765652096902 ရန့်ရွီးနန်းတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2240313999542064/ မိဖုရား မယ်ရွပ်တေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2307298696176927/ ခ်စ်ကြမ္မာ စေခိုင်းရာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2338749813031815&id=1914765652096902 Your Highness 1+2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2172008299705968&id=1914765652096902 ရွားလော့ လူငယ်သိုင်းသမား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2380942032145926/ ဆရာကြီးက်င်းယုံရဲ့ဝတ္ထု ကို ရိုက္ကူးသောသိုင်းကားမ်ား *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Heavenly Sword and Dragon Saber နဂါးနိုင္ဓား( 1986 version)Eng sub https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382289642726298&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (1994) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382289832726279&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (2003 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290059392923&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (2009 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290286059567&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား 2019 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290482726214&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382301586058437&id=100028357959789 *********************** သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း ပထမတြဲ Legend of Condor Heroes 2003 သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290689392860&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351822995772963&id=100028357959789 Legend of Condor Heroes 2008 မက္မြန်ျေမက ခ်စ်တေးတစ္ပုဒ် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290946059501&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291119392817&id=100028357959789 Legend of Condor Heroes 2017 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291389392790&id=100028357959789 *********************** သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း ဒုတိယတြဲ The Return of Condor Heroes 2006 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291596059436&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352211875734075&id=100028357959789 သိုင်းမင်းသားနဲ့ခေ်ာကလ်ာ 1995 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291816059414&id=100028357959789 The Romance of Condor Heroes( 2014 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292096059386&id=100028357959789 ************************ Sword Stained With Royal Blood သြေးသစ္စာဓား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292339392695&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382301792725083&id=100028357959789 *********************** နွင်းတောင်သူရဲကောင်း Fox Volant of Snowy Mountain https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292579392671&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382302539391675&id=100028357959789 ************************ သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ (2000 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292819392647&id=100028357959789 Laughing in the Wind 2001 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293219392607&id=100028357959789 The Swordman 2012 မိစ္ဆာမယ် နွင့် ဖိရွက္ဓားသူရဲကောင်း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293449392584&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382302389391690&id=100028357959789 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ 2018 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2382496895323773/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293632725899&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314037519551511&id=100028357959789 (Eng sub) ************************* တိမ္လွှာနဂါးသူရဲကောင်းမ်ား 2003 The Demi Gods and the Semi Devil 2003 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293842725878&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321777732110823&id=100028357959789 သိုင်းလောကမွ ခ်စ်မေတ္တာ 2013 The Demi Gods and Semi Devil 2013 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382294112725851&id=100028357959789 *************************ျပန္လမ်းမဲ့ကျနြ်း Ode to Gallantry 2002 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382294329392496&id=100028357959789 Ode to gallantry 2017 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382295682725694&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329806884641241&id=100028357959789 (Chinese sub) ************************ Duke of Mount Deer (2000) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382296292725633&id=100028357959789 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ ၂၀၁၈ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2228207037419427&id=1914765652096902 ကေ်ာက္စိမ်းနန်းတော်ရဲ့ ခ်စ္ပုံရိပ္လွှာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2227004057539725&id=1914765652096902 ဆဌဂံလူထူးလူဆန်းမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2377272779179518/ နန်းထိုက္တဲ့တော်ဝင္ပန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2353324341574362/ ရွှေနန်းတော်သူျေမေခြးနတ်သမီးလေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2310991449140985/ ကေ်ာက္စိမ်းဓားရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://m.facebook.com/story.php?story_
မတင်တာကြာလို့ အမုန်းကြည့်လိုရအောင်တင်လိုက်ပြီ ကြည့္က်စမ်း သိုင်းစီးရီး (၂၀၀)ကေ်ာ်အဝကြည့် 😋 +++++++--------------+++++++ AccလေးကိုFollow လုပ္ထားပါ 😍 ****************************************** ရေဆန္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918643188375815/?substory_index=0 မ်က်ရည္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918886241684843/?substory_index=0 မွော်ဝင္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182287888678009/ အံ့ဖြယ္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2174729982767133/ ဝိညာဉ်ခြေမယ့္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1932436730329794/ ပေ်ာက်ဆုံးနေသာဝရဇိန္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2262166060690191/ စစ်သူရဲကောင်းနဲ့ရွှေရာင္ဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1923134694593331/?substory_index=0 သိုင်းလောကပန်းခ်ီနဲ့နဂါးဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2297739193799544/ ဝိညာဉ်ေခြေတေဇာဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2232898426950288/ ဓားဘုရင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226212937618837/ ဓားပ်ံသိုင်းသူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169904239916374/ သိုင်းလောကမုန္တိုင်း ပတြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2181192475454217/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351798449108751&id=100028357959789 သိုင်းလောကမုန္တိုင်း ဒုတြဲ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351811852440744&id=100028357959789 ခ်င် ဒဏ္ဍာရီထဲကဓားမင်းသခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169203073319824/ ကံကြမ္မာလွည့္ဖ်ားရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2204719753101489/ တော်ဝင်အကြံပေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2227746244132173/ နွင်းနဂါးသိုင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919258534980947/?substory_index=0 ငါးကေလး https://www.facebook.com/100028357959789/posts/388232105465385/ မြိုင်ဟေဝန္ကသိုင်းလုလင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2302453779994752/ ဘက္မတူတဲ့တက္လူ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929355083971292/ ငြေအဆင်းနဲ့သမီးတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2281744045399059/ နွင်း‌‌မျွေ္စာင္မွသိုင်းသခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2264455943794536/ ထူးဆန်းထြေလာမွုခင်းကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2235861966653934/ ငြိုးမာန္ဖြဲ့ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226250344281763/ ရွှေမင်းသမီးအားနွုတ်ဆက်ျခင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226235380949926/ တော်ဝင်သစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2230316297208501/ ပညာရွိမေလးလုက်ိမ်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2202528776653920/ https://www.facebook.com/100028357959789/posts/387475585541037/ Princess agent https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1956707834569350/?substory_index=0 မီးလျွံကြားကဧကရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171493643090767/ ဧကရီဝေရန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170473936526071/ ဒဏ္ဍာရီထဲကခ်စ်မေတ္တာ ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2184761495097315/ ခ်စ်သောမင်းကြီး ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170312509875547/ ပ်ားရည္လွှမ်းတဲ့ခ်စ်မေတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2192073961032735/ ကြယ္စင္နတ်သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172515366321928/ မိုးကုပ္စက်ဝိုင်းထိခ်စ်ျခင်းတရားစီသို့ 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171909079715890/ မောင့္ခ်စ်သည်းဧကရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171045153135616/ ခ်စ်ကြမ္မာစေခိုင်းရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2338749813031815/ စစ်ျေမျပင္ကခ်စ်တေးကဗ်ာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2174476602792471/ မဟူရာလွှမ်းတဲ့သိုင်းကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2175064456067019/ မျြေဖူမေလးရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2244976009075863/ မျြေဖူမေလးရဲ့ကံကြမ္မာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171975389709259/ လြီပုနဲ့သောင်းခ်န် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2203884199851711/ The Four https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182439558662842/ အေမွာင္ထုရဲ့သခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2180761058830692/ အေမွာင်လောကရဲ့သိုင်းရာဇာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2303514423222021/ နဂါးညီနောင္နဲ့သြေးကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172662516307213/ Colourful bone https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2180667935506671/ Legend of Zu 1 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169170533323078/ Legend of zu ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2175546292685502/ ခ်စ္လွစြာသောအရွင် ပ+ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172008299705968/ သိုင်းမင်းသားနဲ့အေဆာင္နတ်သမီး 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171675419739256/ The legend of Dugu https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171670426406422/ အေရွ့တိုင်းရဲ့အိုဒစ်ဆီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171525726420892/ မွေ္ပာန်းခ်ီထဲကျေမေခြးလုလင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171403969766401/ ဒဏ္ဍာရျီေမေခြး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169978396575625/ ခ်ယ်ရီသစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171040763136055/ သြေးရောင်ျခယ္တဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170286286544836/ မီးလျွံနတ်သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170283163211815/ ဧကရီဖူယောင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170278623212269/ နတ်သမီးလေးရဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170159109890887/ မက္မြန္ပန်းကေလးမ်ားပြင့္ထူးရာ သုံးဘဝ သုံးကမ္ဘာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169992519907546/ မက္မြန္ပန်းကေလးရဲ့ကတိသစ္စာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2167997576773707/ Love 020 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169987529908045/ သစ္စာတရားရဲ့ဘက်တော်သားမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169984809908317/ ပန်းမိစ္ဆာနဲ့ဓားသူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169906009916197/ မွော်သတို့သမီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169983083241823/ ဝိညာဉ်ခြေဓားနွင့္မရဏစြမ်းအား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169982123241919/ မွော်ကြယ္ပြင့်လေးမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169179569988841/ တိမ္လွှာထက္ကတိုက္ပြဲအလင်္ကာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169177126655752/ တော်ဝင်သြေးစက္ကံကြမ္မာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169146843325447/ နတ်ဆေးဆရာမေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2169095676663897/ သုခမြို့တ္မေွာအမုန်းတရားမီးလျွံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2164984007075064/ စောရဝိဇ္ဇာရွောင်ရိလန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1991294284444038/ ခေတ္တေခတ်၏သြေးနိဒါန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2342327179340745/ တန်မြို့တ္ကောတော်ဝင် ငတက်ျပား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2339019453004851&id=1914765652096902 Detective Dee https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2381274572112672/ The Journey of Flower https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918005735106227/?substory_index=0 The Legend of Dagger Lee https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918008211772646/?substory_index=0 ဝူတန်သိုင်းဆိုတာဒီလို https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2166911446882320/ ဝူတန်ရဲ့ဂန္တဝင်ရွှေဓား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918127061760761/?substory_index=0 Twins of Brother https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918237315083069/?substory_index=0 Legend of Dance https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918510451722422/?substory_index=0 The Myth https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918633545043446/?substory_index=0 သိမ်းဆည်းထားသောအခ်စ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365686547004808/ Princess Pearl https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365195397053923/ New my fair princess 2011 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2365284403711689/ အနက်ရောင္တမန်တော် Guardian https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2352359628337500/ သူရဲကောင်းလေးဖော်နွင့်ရွေးဟောင်းမြို့တော်အတ္ထုပ္ပတ္တိ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2352335615006568/ သူရဲ‌ကောင်းဝူရွင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2340433362863460/ ဒဏ္ဍာရီဓားနွင့္နတ်ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2339263932980403/ မိဖုရားမယ်ရွပ်တေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2307298696176927/ သိုင်းကမ္ဘာမွထာဝရေမတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2306389459601184/ တော်ဝင်သြေးပန်းခ်ီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918754425031358/?substory_index=0 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1932777720295695/?substory_index=0 ဓားသြားအက္ခရာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1918887985018002/?substory_index=0 လျပည့်ညရဲ့ဓားကောက်ရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919242618315872/?substory_index=0 သူရဲကောင်းမေတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919250178315116/?substory_index=0 မာယာ‌‌သွေးကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919477361625731/?substory_index=0 သိုင်းမင်းသားနွင့္နတ္မိမယ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919720921601375/?substory_index=0 နက္ခတ္မွားတဲ့ဖူးစာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919833644923436/?substory_index=0 ပါဝါသိုင်းစိန်ခေါ်သံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919835708256563/?substory_index=0 အခ်စ်နွင့္တိုက္ပြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1919871071586360/?substory_index=0 စိတ်ညှို့ရွင်နွင့်မွေ္နာဂါး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920039451569522/?substory_index=0 မိစ္ဆာခ်ိန်သီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920220821551385/?substory_index=0 ကေဝပ်ိုနဲ့နတ္စစ်သူကြီးသုံးပါး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1923867654520035/?substory_index=0 ကောင်းကင္တိုက္ပြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1924150987825035/?substory_index=0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351989782422951&id=100028357959789 သိုင်းမင်းသားနွင့်ဥဒေါင်းတောင္ပံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920416408198493/?substory_index=0 မရဏေက်ာ့ကြင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920425171530950/?substory_index=0 သြေးဇာတ္လမ်းရဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ္ပုဒ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1920477428192391/?substory_index=0 ကြည်နူးဖြယ်ရာပ်ိုကညာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922617424645058/?substory_index=0 မာနရွင္ကိုလူခေ်ာနဲ့နတ္ဖက္တဲ့ဖူးစာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1928737317366402/ ‌ကောင်းကင်တောင္မွဓားသူရဲကောင်းခုနစ်ဖော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922984844608316/?substory_index=0 မိုျးေမစစ်သူကြီး https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1723533507943614&id=1623292764634356 ငြိုးသူကလဲ့စား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2204809773092487/ စစ်သူရဲကောင်းတို့ခင်းတဲ့ဗ်ူဟာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1924522174454583/ အဆိပ္ဘုရင္နဲ့သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1925363504370450/ ပြိုင္ဘက္ကင်းသိုင်းသမား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1925410854365715/ လေလြင့်မြို့ရိုးမွဓားမုန္တိုင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1926686590904808/?substory_index=0 ကြယ္ပ်ံဥက္ကာဓားလိပ်ျပာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929355500637917/?substory_index=0 ဓားသြားထက္ကစိန်ခေါ်သံ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929357807304353/?substory_index=0 မွော်သိုင်းကား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1931861097054024/ မိစ္ဆာရန္စယ်ြနွင့်မေတ္တာရွင္မေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1928105637429570/?substory_index=0 အိပ္မက်သူရဲကောင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2177571219149676/ Ice Fantasy 1+2 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1922924637947670/?substory_index=0 လူငယ်ပေါင္ခ်ိန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929356593971141/?substory_index=0 လူငယ်ပေါင္ခ်ိန် တတြဲ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1929357220637745/?substory_index=0 ပေါင္ခ်ိန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171842999722498/ ငါးနီမေလးနဲ့ပုလဲဆံထိုးလူသတ္မွု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2182285362011595/ က်ိကုန်းကိုယ်တော် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314915986130331&id=100028357959789 အာစရိဂုဏ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1937581056482028/?substory_index=0 ထင်ရာစိုင်းတဲ့ဓားသြား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1938149583091842/ Empires and me https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2251834175056713/ အိမ်ရွေ့စံမင်းသမီးလေးရဲ့ကြင်ယာတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2257113944528736/ စြန်းဝူခုံးနဲ့မွော်ဝင်ကြာပန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2256595974580533/ စြန်းဝူခုံးနဲ့မွော်ဝင္ဓာတ္လုံး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170881856485279/ စြန်းဝူခုံးနွင့်အေနာက္ဖက်သို့အခ်စ္မ်ားနဲ့ခရီးနွင်ျခင်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171506663089465/ အေနာက်သို့ခရီး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170881139818684/ ပင္လယ်ပေ်္မာင်းသားနွင့် အသက်ဆက်သတို့သမီး 1 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2239035329669931/ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2171927213047410/ နဂါးညီနောင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2170266006546864/ စစ်သူကြီး မူလန် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1965915890315211/ နတ္ဓားရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1940919369481530/ သစ္ခြအရွင်သခင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/1940846632822137/ လေပြမိန်းကေလး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2211542709085860/ သင်းရနံ့တို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2206534419586689/ သိုင်းဝိညာဉ်နွင့္ခ်စ်သူလိပ်ျပာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2206106919629439/ လနတ်သမီးနဲ့လေးညှို့ရွင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2194408794132585/ ကြောင္ကေလးရဲ့ခ်စ္ပျုံပင် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2194213557485442/ ရာဇဝင္ထဲကသူမ ဒု https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2179994215574043/ ဂြိုဟ်သူမေလးရဲ့ခ်စ်သူ ပ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2179727852267346/ ဂြိုဟ်သူမေလးရဲ့ခ်စ်သူ ဒု https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315042666117663&id=100028357959789 ထူးဆန်းသောကံကြမ္မာနဲ့ဘုရင်ျဖစ်ရတဲ့ဒုက္ခ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2172039226369542/ ဒဏ္ဍာရီထဲကခ်စ္ပန်းမာယာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2240392856200845/ ဝိညာဉ်ေခြေတေဇာဓား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232898426950288&id=1914765652096902 ငြိုးမာန္ဖြဲ့ဝိညာဉ် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2226250344281763/ သိုင်းကမ္ဘာမွထာဝရေမတ္တာ https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2306389459601184/ ခေတ္တေခတ်၏သြေးနိဒါန်း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2342327179340745&id=1914765652096902 ဇာမဏီငွက္တို့ရဲ့ပျုံပင် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2305827129657417&id=1914765652096902 ရန့်ရွီးနန်းတော် https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2240313999542064/ မိဖုရား မယ်ရွပ်တေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2307298696176927/ ခ်စ်ကြမ္မာ စေခိုင်းရာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2338749813031815&id=1914765652096902 Your Highness 1+2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2172008299705968&id=1914765652096902 ရွားလော့ လူငယ်သိုင်းသမား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2380942032145926/ ဆရာကြီးက်င်းယုံရဲ့ဝတ္ထု ကို ရိုက္ကူးသောသိုင်းကားမ်ား *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Heavenly Sword and Dragon Saber နဂါးနိုင္ဓား( 1986 version)Eng sub https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382289642726298&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (1994) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382289832726279&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (2003 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290059392923&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား (2009 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290286059567&id=100028357959789 နဂါးနိုင္ဓား 2019 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290482726214&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382301586058437&id=100028357959789 *********************** သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း ပထမတြဲ Legend of Condor Heroes 2003 သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290689392860&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351822995772963&id=100028357959789 Legend of Condor Heroes 2008 မက္မြန်ျေမက ခ်စ်တေးတစ္ပုဒ် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382290946059501&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291119392817&id=100028357959789 Legend of Condor Heroes 2017 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291389392790&id=100028357959789 *********************** သိမ်းငွက်သူရဲကောင်း ဒုတိယတြဲ The Return of Condor Heroes 2006 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291596059436&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352211875734075&id=100028357959789 သိုင်းမင်းသားနဲ့ခေ်ာကလ်ာ 1995 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382291816059414&id=100028357959789 The Romance of Condor Heroes( 2014 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292096059386&id=100028357959789 ************************ Sword Stained With Royal Blood သြေးသစ္စာဓား https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292339392695&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382301792725083&id=100028357959789 *********************** နွင်းတောင်သူရဲကောင်း Fox Volant of Snowy Mountain https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292579392671&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382302539391675&id=100028357959789 ************************ သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ (2000 Version) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382292819392647&id=100028357959789 Laughing in the Wind 2001 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293219392607&id=100028357959789 The Swordman 2012 မိစ္ဆာမယ် နွင့် ဖိရွက္ဓားသူရဲကောင်း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293449392584&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382302389391690&id=100028357959789 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ 2018 https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2382496895323773/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293632725899&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314037519551511&id=100028357959789 (Eng sub) ************************* တိမ္လွှာနဂါးသူရဲကောင်းမ်ား 2003 The Demi Gods and the Semi Devil 2003 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382293842725878&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321777732110823&id=100028357959789 သိုင်းလောကမွ ခ်စ်မေတ္တာ 2013 The Demi Gods and Semi Devil 2013 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382294112725851&id=100028357959789 *************************ျပန္လမ်းမဲ့ကျနြ်း Ode to Gallantry 2002 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382294329392496&id=100028357959789 Ode to gallantry 2017 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382295682725694&id=100028357959789 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329806884641241&id=100028357959789 (Chinese sub) ************************ Duke of Mount Deer (2000) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382296292725633&id=100028357959789 သိုင်းလောကရဲ့စိန်ခေါ်သံ ၂၀၁၈ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2228207037419427&id=1914765652096902 ကေ်ာက္စိမ်းနန်းတော်ရဲ့ ခ်စ္ပုံရိပ္လွှာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2227004057539725&id=1914765652096902 ဆဌဂံလူထူးလူဆန်းမ်ား https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2377272779179518/ နန်းထိုက္တဲ့တော်ဝင္ပန်း https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2353324341574362/ ရွှေနန်းတော်သူျေမေခြးနတ်သမီးလေး https://www.facebook.com/1914765652096902/posts/2310991449140985/ ကေ်ာက္စိမ်းဓားရဲ့ဒဏ္ဍာရီ https://m.facebook.com/story.php?story_ Korea Thailand Chinese Movie Page 29 Jan 2020 · 998 views
မွန်လေး ရဲ့ အပြင်းစား ရိုက်ချက် - ၂
ပိုက်ဆံပေးခေါ်တိုင်း မလိုက်တဲ့ သူတောင်းစား ! 09 256070900 , 09 73206348 , 09 424870011 1000 ကျပ်တည်းနဲ့ယောင်္ကျား ပီသလို့ရပြီ နော် ! ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 💪💪🥙 ကျန်းမာပြီး ခွန်အားဖြစ်စေဖို့မဖြစ်မနေ စားသောက်ရမည့် အစားအစာများ 🥙💪💪 🍉ဖရဲသီး ၊ 🥑 ထောပတ်သီး ၊ 🍌 ဖီးကြမ်း ဌက်ပျော ၊ 🍌 သီးမွှေး ဌက်ပျော ၊ 🥛 ဒိန်ချဉ် ၊ 🍡 ရုံးပတေသီး ၊ 🔅 ဂျင်း ၊ 🥕မုန်လာဥနီ ၊ 🥓 ငါးရှဉ့် ခြောက်စပ် ၊ 🥜 ဗာဏာစေ့ ၊ 🥐သစ်ကြားသီး ၊ 🥜သီဟိုစေ့ တို့ကို မိမိ တစ်ပတ် စားသောက်သည့် အစားအသောက်များထဲတွင် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်မျိုး သို့ 3️⃣ သုံးမျိုး ပါအောင်စားပေးရပါမည် ။ 🍅 ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ကို နေ့ တိုင်းထမင်းနှင့် အတူ အနည်းဆုံး 1️⃣ ကြိမ် ( နေ့ လည်စာ ) စားပေးရပါမည် ။ 1️⃣ တစ်ရက်လျှင် ရေ အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်လီတာ သောက်ပေးရမည် ။ ❌ ဆေးလိပ် ၊ အရက်၊ ကွမ်း စသည်တို့ သည် ယောင်္ကျားဟော်မုန်း ၊ ယောင်္ကျားခွန်အား နှင့် စွမ်းဆောင်အားတို့ ကို ဆိုးရွားစွာကျဆင်းစေပါသဖြင့် ရှောင်ရပါမည် ။ ❎ မရှောင်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံး 5️⃣0️⃣ % လျော့ရပါမည် ။ 🍷ဝိုင်အနီ တစ်ရက်လျှင် ဝိုင်ခွက် 2️⃣ ခွက်သောက်ပေးပါက ကောင်းပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻🔻🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 3️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 1️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။ ☑️အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံစွဲးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻🔻🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 9️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 6️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။များသောအားဖြင့် ( 8️⃣0️⃣ % ခန့် မှာ ) 6️⃣ ဘူးသောက် 4️⃣ ဘူး လိမ်းရုံဖြင့် ရောဂါ ပျောက်သွားကြပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻🔻🔻 ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 2️⃣ ပတ် မှ 3️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻🔻🔻 ပါဝါဟန်းနီး 2️⃣ ဘူးသောက် ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 3️⃣ ပတ်မှ 5️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ============================= ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန် ရောင်းတဲ့ 🍁 1 Stop Mart 🍁 တွေမှာ ဝယ်လို့ ရပြီနော် ! ဆေးလိပ် အရက် ကွမ်း အဲဒါတွေအားလုံးနဲ့မကင်းရင် ပါဝါဟန်းနီးပါတွဲသောက်ပေးရမှာပါ ။ ကင်းရင်တော့ ပါဝါလိုးရှင်း လိမ်းပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့ ဆွဲပေးပါ ! ================================ ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) မိန်းမတိုင်း မလွတ်တန်း ကြည့်သင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေး ! ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် ၊ ပတ္တရား ၊ မဲဆောက် ၊ ခင်းမိုင် ၊ ဖူးကက် မြို့ တွေမှာ ဘန်ကောက်မြို့ တွင်း အရောက်ပို့၄၅ဘတ် နဲ့မြို့ ပြင် နဲ့ အခြားမြို့ တွေကို အရောက်ပို့ဘတ် ၇၀ ထဲနဲ့ ပို့ ပေးနေပါပြီ ။ ငွေ လွှဲပေးရမဲ့ကိစ္စကို ချက်ဘောက် မှာ ဖြစ်ဖြစ် +959953055056 ( VIBER ) ကနေ ဆက်သွယ် မေးမြန်းလို့ ရပါပြီ ! ပါဝါဟန်းနီး ဘူး - 480 ဘတ် + အရောက် ပို့ ခ ( ၄၅ - ၇၀ ) ဘတ် ပါဝါလိုးရှင်း ဘူး - 570 ဘတ် + အရောက် ပို့ ခ ( ၄၅ - ၇၀ ) ဘတ် လေစုပ်ပြွန်စက် - 990 ဘတ် + အရောက် ပို့ ခ ( ၄၅ - ၇၀ ) ဘတ် ပစ္စည်း တမျိုးမှာမှာ ၁၀ မျိုးမှာမှာ ပို့ ခကို တကြောင်း 1kG နဲ့ 1 KG အောက် အတွက်ဘဲ ဘန်ကောက် မြို့ တွင်းဆိုရင် ၄၅ ဘတ် မြို့ ပြင်နဲ့အခြားမြို့ ဆွေဆိုရင် ဘတ် ၇၀ ပါ ။ 1 KG ဆိုရင် ခန့် မှန်းခြေ ၅ ဘူးလောက်ပါပါတယ် ။ 1 KG ကျော်သွားရင် မြို့ တွင်း ဘတ် ၇၀ မြို့ ပြင် နဲ့ အခြားမြို့ တွေကို ၁၃၅ ဘတ် ပေးရပါ့မယ် ။ တသက်လုံး အပျိုစင်လေးလို အမြဲ နုပျို လန်းဆန်း နေပြီး အိမ်က ယောင်္ကျားကို မလှုပ်နိုင်အောင် ချူပ်ကိုင် ထားချင်ပါသလား ? ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန် ရောင်းတဲ့ 🍁 1 Stop Mart 🍁 တွေမှာ ဝယ်လို့ ရပြီနော် ! ဒီ ပို့ စ်မှာ မြန်မာပြည် အနှံ့ မှာ တရားဝင် တင်ရောင်းပေးနေတဲ့ဆေးဆိုင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်တွေရဲ့အမည် လိပ်စာ ဖုန်း တွေ အကုန်ပါတယ်နော် ! အမျိုးသမီးတွေ ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်အရောက် ဆေးမှာချင်ရင် ဖုန်းပြောတဲ့ အခါအမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း နဲ့ ပြောလိုပါတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်သူကို ပြောလိုက်လို့ ရပါတယ်နော် ! ================================ တသက်လုံး အပျိုစင်လေးလို အမြဲ နုပျို လန်းဆန်း နေပြီး အိမ်က ယောင်္ကျားကို မလှုပ်နိုင်အောင် ချူပ်ကိုင် ထားချင်ပါသလား ? 🌺 အမျိုးသမီးသုံး PV Care Gel 🌺 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 014510 ( 1221 ) နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ တစ်ဘူး ဆိုရင် ၂ လ သုံးလို့ရပြီး ရောင်းဈေးက တစ်ဘူးကို 18000 ကျပ် ပါ ❗️ 🥀လိမ်းရင် ရရှိနိုင်မဲ့ အကျိုးကျေးဇူး🥀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌹အမျိုးသမီး အဂါင်္ကို အမြဲ မွှေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါ ကင်းစေပါတယ် ! အဖြူဆင်းတာ အနံ့အသက် ထွက်တာတွေ လုံးဝ မဖြစ်တော့ပါဘူး ❗️ 🌹 လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်တက်တဲ့ ရောဂါတွေ မဖြစ်ဖို့ 90% ကာကွယ်ပေးပါတယ် ❗️ 🌹 လျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းနံရံတွေ အတွင်းနဲ့ အပြင်မှာ မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးရုံနဲ့ (45) ရက်အတွင်း အပျိုစင်လေးလို ပြန်လည် တင်းရင်းစေမဲ့ အခြေအနေလေးကို ပြန်ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹 အမျိုးသမီး အဂါင်္အတွင်း PH Level ကို အမြဲတမ်း 4.5 မှာ ထိန်းညှိပေးထားမှာ ဖြစ်လို့ အခြား ဘာ PH Care မှ သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး ❗️ 🌹 သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းမှလည်း 95% လောက် ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ 🌹 ကိုယ့် ယောင်္ကျား ၊ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်ကလွဲလို့ တခြားဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်မဝင်စား နိုင်လောက်အောင်ကို စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹အိမ်ထောင် မရှိတဲ့ အပျိုတွေ သုံးရင် အသက်ကြီးလာသည်အထိ တင်းရင်းပြီး အနံ့အသက် ကင်းစင် ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရနိုင်တဲ့ရောဂါ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း တွေကိုလည်း ၉၅ % လောက် ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 P V Care Gel (ပီဗီကယ်ယား ဂျယ်လ်) ဆေးသုံးရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌸 ကလေး မွေးပြီး တစ်လကျော်ရင် စသုံးလို့ ရပါပြီ ! 🌸 အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အတွင်းဘက် နံရံတွေကို လက်ညိုးနဲ့ ဆေးအနှစ် နည်းနည်းယူပြီး သုတ်လိမ်းပေးရပါမယ် ! ပြီးရင် အပြင်ဘက်ပါ အနည်းငယ်လိမ်းလိုက်ပါ။ မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ ကြိမ် လိမ်းရပါမည် ! နောက်တစ်ကြိမ် မလိမ်းမှီ ပထမ တစ်ကြိမ် လိမ်းထားပြီးသားကို ရေနဲ့ ဆေးချရပါမယ် ! ဆိုလိုတာက နေ့စဉ် … မနက် လိမ်းထားတာကို ည ကျရင် ဆေးချ ၊ ည ပြန်လိမ်း။ ည လိမ်းထားပြီးသားကို မနက် ပြန်ဆေး၊ ပြီးရင် တခါထဲ မနက် ပြန်လိမ်းပါ။ 🚦မှတ်ချက်။ ။ ရာသီလာချိန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လုံးဝ မလိမ်းရပါ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ မိန်းမများအတွက် ♦️ ➖➖➖➖➖➖➖ 🌐 ကမ္ဘာတဝှမ်း အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေကြတာကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း နှင့် ယောင်္ကျား များနှင့် ဆက်ဆံ ခါ များလာသည့်အခါ အင်္ဂါ တွင်း နံရံများ ရော့တွဲလာကြသဖြင့် မိမိခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိတော့ခြင်း စတာတွေက အဖြစ်များနေကြပါတယ် ! 🤱 ကလေး မွေးတဲ့အခါ ရိုးရိုးမွေးပြီးတော့ ပြန်ချုပ်ထားရင်လည်း အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းသားတွေဟာ ပျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်သွားလို့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားမှု အပြည့်အဝ မပေးနိုင်ကြတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ် ❗️ 🤦‍♀️ အဲ့လိုအခါမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသားရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ တွေ့ကြုံရတက်ပါတယ် ❗️ 🙅‍♀️ အဲ့လို အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ မဖြစ်ကြရအောင် အမျိုးသမီးတွေ ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း အပျိုစင်လေး တစ်ယောက်လို မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေး သုခ အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ကြပြီး အိုမင်းသည်အထိ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်အောင် SKY LARK က စေတနာ မေတ္တာအပြည့်အ၀နဲ့ အမျိုးသမီး သုံး P V Care Gel ( ပီဝီ ကယ်ယား ဂျယ်လ် ) ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ပြီး 11 လ ပိုင်း 2017 မှ ဈေးကွက်ထဲ စတင် ရောင်းချပေး နေပါတယ် ! နောက်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ P - V Care နဲ့အတူ အမျိုးသမီး အင်္ဂါက အမွှေးတွေကို သဘာဝ နည်းနဲ့ အမြဲအတွက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့ P-V clean အမွေးဖယ်ရှားဆေး ကိုပါ လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်လို့ ဆေးဆိုင်တွေမှာလည်း ဝယ်လို့ ရတယ်နော် ! 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ယောင်္ကျားသားတွေ သင်တို့ လည်း . . . . သင်လည်း ပျိုတိုင်း ခိုက်တဲ့ နှင်းဆီတိုင် ဖြစ်လို့ ရပြီနော် ! ခုဆို 1,000 ကျပ် ထဲနဲ့စော်ကြည်ဘဲလေး ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရနေပြီလေ ! ပါဝါလိုးရှင်း လိမ်းပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့၁၀ မိနစ်လောက် တစ်ရက် ၂ကြိမ် ဆွဲပေးရင် ၂ပတ်ဆို ရှယ် သိသာပြီ နော် ! လေစုပ်ပြွန်စက် - 33,000 ကျပ် ပါဝါလိုးရှင်း - 21,000 ကျပ် @@ သတိ - ဒီ ကြော်ငြာကို ကြည့် ပြီး ဆေးဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ရင် ဆေးဆိုင်တချို့ က သူတို့ အတွက် အမြတ်အများကြီး ပိုကျန်တဲ့ တရားဝင်မှတ်ပုံ မတင်ထားတဲ့ဆေးအတုတွေကို ပါဝါဟန်းနီး နဲ့ပါဝါလိုးရှင်း တွေထက်အများကြီး ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး လိမ်ရောင်းကြပါလိမ့် မယ် ။ ဆေးအတုတွေက 10,000 ကျပ်နဲ့ ရောင်း၇င် ဆိုင်သမားကို 6,000 ကျပ်လောက် အမြတ်ပေးကြတာလေ ! ခုဒီစာကို ဖတ်ပြီးရင်တော့" ငါအဲလောက်မအဘူး လို့သာ ရင်ကော့ပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါ ! " =========%%%%%%%%%=============== 📣 မလေးရှား နဲ့စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေမှာ အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဈေးတွေ နဲ့ ဝယ်လို့ ရနေပါပြီ နော် +60183913112 မလေးမှာ ခုဝယ်လို့ ရနေပါပြီ 🗓 စတင်ဝယ်ယူနိုင်မည့် နေ့ - 1 -6- 2019 💁‍♂️ ပါဝါဟန်းနီး = 100 RM , ပါဝါလိုးရှင်း = 120 RM ပီဝီကယ်ယားဂျယ် ဘူး - 120 RM လေစုပ်ပြွန်စက် - 165 RM =========%%%%%%%%%=============== အချစ် စစ် အချစ် မှန် နဲ့ တသက်လုံး သစ္စာရှိရှိ ချစ်ကြတဲ့ ယောင်္ကျားမြတ်တွေရဲ့ လက်စွဲ . . . 🌺" ပါဝါဟန်းနီး "🌺 သောက်ဆေး နဲ့ 🌹" ပါဝါလိုးရှင်းလေး "🌹လိမ်ဆေး ================================= 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🤐သတိ - ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ဖတ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းခြင်း မပြုပါရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည် ❗️❗️❗️ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🤓 အစ အဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်ပေးပါ ❗️👇👇 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💧 ဈေးနှုန်းများ 💧 ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်များ 💧 အမျိုးသားများအတွက် ဆေး အာနိသင်| ဆေး အသုံးပြုပုံ| ဆေး အကျိုးကျေးဇူးများ 💧 အမျိုးသမီးများအတွက် ဆေး အာနိသင်| ဆေး အသုံးပြုပုံ| ဆေး အကျိုးကျေးဇူးများ 💧 မြန်မာတပြည်လုံး မြို့များရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည့် ဆေးဆိုင်များ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 💰 16,000 ကျပ် 🚩 ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် 🚩P-V Care Gel (ပီဗီကယ်ယား ဂျယ်လ်) 90ml - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☎️ ဖုန်းနံပတ်များ 🚩 ရန်ကုန်ရုံး > 09 256070900 | 09 424870011 🚩 မန္တလေးရုံး > 09 73206348 | 09 766005064 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 😳😳 ဆေး အာနိသင် သိသာမှု 😳😳 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🤨 လူငယ် လူကြီး တော်တော်များများဟာ ခုလုပ် ခုချက်ချင်းအစွမ်းပြ ဆိုတာတွေကိုသာ ပညာမဲ့စွာ ကြိုက်နေကြလို့ ကြီးဆေး ထိုးကြ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဗေဒ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းကြပြီး တစ်လလောက်ဘဲ သာယာမှုကိုရကြပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကို မရှုမလှ ခံစားနေကြရပါတယ် ❗️ 😌 အလကားပြောနေတာ လို့ ထင်နေရင် အဲဒါတွေကို စိတ်ကြိုက်ငွေကုန်ခံပြီး အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး ! နောက်ဆုံး ဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုးရောက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ စိတ်အလိုကျ ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် ခု ပိုမို အစွမ်းထက်အောင် ပြု ပြင်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 👇👇 ♦️ ပါဝါဟန်းနီး ♦️ ➖➖➖➖➖➖ 😳 ပထမ တစ်ရက် တစ်ဇွန်း သောက်လိုက်ရုံဖြင့် ထူးထူးခြားခြား သိသာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ ♨️" ပါဝါဟန်းနီး " သောက်သူတိုင်းက ဆေးကို အလွန်ကြိုက်ကြပြီး အနံ့ နဲ့ အဝင်ဆိုးတာ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလာကြသူတွေ ရှိလို့ အခု အ နံ့ မွှေးပြီး အရသာလေးကောင်းအောင် ပြန်ပြု ပြင်ထားပါတယ်နော် ❗️ ♦️ ပါဝါလိုးရှင်း ♦️ ➖➖➖➖➖➖ 💁‍♀️ လိမ်းဆေးကို အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ ! ဘေးထွက် ဆိုကျိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ 100 % သဘာဝ ဆေးဖြစ်လို့ ခုလိမ်း ခုချက်ချင်းတော့ ဖြစ်မလာပါဘူး! ဒါပေမဲ့ ၆ လ နဲ့ ၉ လ အတွင်း သင်မှန်းပြီး လိုချင်နေတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး စွမ်းရမယ် ဆိုတာတော့ လုံးဝ အာမခံပါတယ် ❗️ 😇 တစ်သက်လုံး ဘေးကင်းပြီး စိတ်တိုင်းကျ သာယာ နိုင်ဖို့ ၉ လ လောက် အချိန်ပေးရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲ တွက်တွက် တန် မှတန် ပါဘဲ ❗️ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ပါဝါ ဟန်းနီး (100 % သဘာဝ ဆေး ) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ♦️ ************************************************ ■ ပန်းသေ ပန်းညိုး ပျောက်စေပါသည် ။ ■ သုတ်လွှတ် မြန်ခြင်းကို ပျောက်စေပါသည် ။ ■ ခြေဖျားမှ ဦးနှောက်အထိ ရှိသမျှ သွေးကြော အားလုံးတွင် သွေးကို လျှောက်စေသောကြောင့် အကြောအားနည်းသူများ ပိုလီယို ရောဂါ ခံစားနေရသူများ နှင့် တခြမ်းလေဖြတ် အောက်ပိုင်းသေနေသူများ ပုံမှန် အသုံးပြုပေးပါက ရောဂါ သက်သာစေရန် များစွာအထောက်အကူ ပြုသည် ။ ■ သုတ်ကောင်အရည်အတွက် ပွားစေပြီး သုတ် အရည်အသွေးကိုပါ မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကျန်းမာ သန်စွမ်း ဥာဏ်ကောင်းသော ကလေးရလိုသူများ Course အလိုက် မှီဝဲ နိုင်ပါသည် ။ ■ သွေးကို တကိုယ်လုံးတွင် ကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးသဖြင့် စိတ်ပါသလောက် ကိုယ်က လိုက်ပါ ပြီး မမောတမ်း တခါပြီးတခါ ဆက်တိုက် စွမ်းဆောင် နိုင်သည် ။ ■ ဆက်ဆံ နေစဉ် ယောင်္ကျား အဂါင်္ ကို တောင့်တင်း သန်မာ ထွားစေသည် ။ ■ ဦးနှောက်တွင်း အနှံ့ သွေးကိုရောက်စေသဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကိုပါမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် လူ ကိုယ် ကိုသာမက စိတ်ဓာတ် ကိုပါ ယောင်္ကျား ပီသစေပါသည် ။ ■ ဆီးကြိတ် ရောင်သူများ Course အတိုင်း မှီဝဲပါက ရောဂါ ကို အထူးသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ လုံးဝ မသောက်သုံးရ ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ပါဝါ လိုးရှင်း (100 % သဘာဝ တိုင်းရင်းဆေး ) ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ♦️ ************************************************ ■ အမျိုးသား လိင်အဂါင်္ ပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လိင်အဂါင်္ အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး လိင်အဂါင်္ အတွင်းရှိ သွေးအိတ်ထဲသို့သွေးအပြည့် ရောက်စေသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ လိင်အဂါင်္ ကို နဂိုထက် ပိုကြီးထွားလာစေပါသည် ။ ■ လိင် ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ ကူးစက်ခြင်းမှ 95% ကာကွယ်ပေးပါသည် ။ ■ လိင်တံကို အမြဲ သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေစေပြီး ဖြူဝင်းလာစေသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) ၏ နှစ်လိုဖွယ် ယုယုယယစိတ်ပါ ဝင်စားစွာဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းကို ခံရပါမည် ။ ■ ဤ လိမ်းဆေးကို စား၍ ရသော ဆေးဘက်ဝင် သဘာဝ ပစ္စည်း များဖြင့်သာ ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် မိမိအားပြုစုပေးသော ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) မှပြုစုပေးနေစဉ် တံထွေး မျုို ချ မိပါက ဤ ဆေး သည် ၄င်း ( အမျိုးအမီး / ချစ်သူ ) ၏ ဓမ္မတာ ကို မှန်စေသွေးအားကောင်းစေပြီး သားအိမ်ကို သန့်စေပါသည် ။ အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်စေပါသည် ။ ■ အကြောထိန်းအားကိုလည်း ကောင်းမွန်လာစေသောကြောင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ လေဖြတ်ထားသူများ လေဖြတ်ထားသည့် လက် / ခြေတောက် များတွင် တရက် ၃ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးပါက နဂို ပုံမှန် ပဂတိ အခြေအနေမျိုးပြန်ဖြစ်လာအောင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည် ။ ■ တစ်လ တစ်ကြိမ် တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ့ လိမ်းပေးပါက လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင် အထူး ကာကွယ် ပေးပါသည် ။ ■ ပိုလီယို ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း လိုအပ်သော နေရာတွင် လိမ်းကာ အသုံးပြုပါက နဂိုထက် သိသိသာသာ ထူးခြား သိသာလာမည် ဖြစ်ပါသည် ။ ■ အကြောညှပ်ခြင်း ၊ အကြောကပ်ခြင်း ၊ ကျင်ခြင်း ၊ ထုံခြင်း ၊ လက်ပြင်ကြောလွဲခြင်း ၊ ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ■ ယောင်္ကျား အဂါင်္ အကြောအားနည်းခြင်းအတွက် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ■ ကျန်ရောဂါများ အတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ တနေ့ ၃ ကြိမ်မှန်မှန် လိမ်းပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013089 နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါလိုးရှင်း 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013306 နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 (ပါဝါဟန်းနီး) ဆေးမှီဝဲရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❣️မည်သည့် ရောဂါ အတွက်မဆို ဆေးပတ်လည်စေရန် တခါသောက်ရင် ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး = One Course ပြည့်အောင် သောက်သုံးရပါမည် ။ ❣️ဘူးအတွင်းတွင် ဇွန်း ပါပါသည် ။ ပထမ တဘူး တရက် တဇွန်း ( ညသောက်လျှင် နေ့ တိုင်း ည ၊ မနက်သောက်လျှင် နေ့တိုင်း မနက် ) ၁၀ ရက် ဆက်တိုက် သောက်ရပါမည် ။ ဒုတိယ နှင့် တတိယ ဘူးများကို တရက် ခြားဆီ သောက်ရပါမည် ။ ❣️ One Course3ဘူး သောက်ပြီးလျှင် မိမိ မူလ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၆ လ မှ အများဆုံး တနှစ်ထိ မည်သည့်ဆေးမှ မှီဝဲ စရာ မလိုတော့ပါ ! ❣️ ပိုလီယို ရောဂါ နှင့် ဆီးကြိတ် ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း အထက်ပါ အတိုင်း ရွှေ ရောင်ဘူး ၃ လ အဖြူရောင်ဘူး ၃ လ ဆက်တိုက် တလှည့်စီ စွဲ သုံး နိုင်ပါသည် ။ ❣️ အလွန် အားနည်းနေသူများ ရွှေရောင်ဘူး One Course သောက်ပြီး ၃ လ အထိ အြ 🚦မှတ်ချက် >> လိင် အဂါင်္ ထွားလိုသူများ ရွှေရောင်ပ ပါဝါဟန်းနီ3းဘူး သောက်နေစဉ် ပါဝါလိုးရှင်း2ဘူး ကုန်အောင်တွဲလိမ်း အသုံးပြုပေးပါရန် ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 (ပါဝါလိုးရှင်း) ဆေးသုံးရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌷 အရေပြားလှန်ပြီး လိင်တံနှင့်ဝှေးစေ့တို့ကို ဆပ်ပြာဖြင့် သေသေချာချာဆေးပြီး ခြောက်အောင်သုတ်ပါ ။ ညှစ်ပန့်ကိုနှိပ်ပြီး လက်ဖဝါးပေါ်သို့ လိုးရှင်းအနည်းငယ်ယူပြီး ဝှေးစေ့နှင့်လိင်တံအနှံ့ သေချာစွာနှိပ်ပြီး လိင်တံကို အောက်ဘက်သို ဆွဲချကာ ဆေးစိမ့်ဝင်သွားသည့်အထိ (၁၅) မိနစ် ၀န်းကျင်လောက် လိမ်းပါ ။ မနက် နေ့လည် ည တစ်ရက် ၃ ကြိမ် (၂ လ) အထိ လိမ်းပေးပါ ။ 🗣 လိင်တံ ကို တရက် ၃ ကြိမ် လိမ်းရန်သာ အသုံးပြုပါက ပါဝါလိုးရှင်း တဘူး တစ်လ အသုံးခံပါသည် ။ ပထမဆုံး စအသုံးပြုသူများ ပါဝါဟန်းနီ3းဘူး One Course သောက်နေစဉ် ရက် ၅၀ အတွင်း ပါဝါလိုးရှင်း 2ဘူးကိုပါ တွဲလိမ်း သုံးပေးပါ ။ သို့မှသာ ဤ ၂ ဘူး ကုန်သည့်အခါ သင့် လိင် အဂါင်္ သိသိသာသာ ကြီးထွား လာပါမည် ။ နောက်ပိုင်း ဆက်သုံးလိုပါက ပါဝါဟန်းနီး သောက်ရန် မလိုတော့ဘဲ လိုးရှင်း ချည်း သက်သက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ယခုမှ စအသုံးပြုသူများ လိုးရှင်း တခုတည်းသာ သုံးပါက သိသိသာသာ ထူးခြားမှု နည်းပါသည် ။ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ ယောင်္ကျားများအတွက်♦️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌐 ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက် ၂၀ နဲ့ ၄၀ ကြား လူငယ် 20% နဲ့ အသက် 40 နဲ့ 60 ကြား လူလတ်ပိုင်း 80% တွေဟာ ယောင်္ကျား ဟိုမုန်းဓာတ် မှတ မှန်ကန်မှု မရှိကြတဲ့အတွက် ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရပါတယ် ❗️ 😔 အသက် ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဲလို ဖြစ်နေကြသူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း ၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ၊ လူတောမတိုးရဲခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို အားမရခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ်စိတ်မဝင်စားခြင်း စတာတွေ ကို ပါ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ခံစားနေကြရပြီး ထွက်ပေါက်တွေ အနေနဲ့ တချို့က လောင်းကစားသမား ၊ တချို့က အရက်သမား ၊ တချို့ က မိန်းမ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ကောင်းလာမလားဆိုပြီး KTV , Club တွေ မှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန် ဖြုန်းသူတွေ ဖြစ်လာကြရုံမက တချို့က စိတ်ဓာတ်တွေ တအားကျပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သွားကြတဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ အများကြီး ရှိပါတယ် ❗️ 💁‍♂️ တချို့ ယောင်္ကျားတွေက ကျန်တာတွေ အကုန်ကောင်းနေပြီး သုတ်ရည်မှာ သုတ်ကောင်အရေအတွက်ပါဝင်မှု နည်းနေလို့ ကလေး မရနိုင်တာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ❗️ ⭐️ ခု SKY LARK က တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထုတ်တဲ့ 100% HERBAL ( သဘာဝ ) တိုင်းရင်းဆေး " ပါဝါဟန်းနီး " က အထက်ဖော်ပြပါ ဝေဒနာ တွေ ကို ဘာမှဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကောင်းတလက်ပါ ❗️ "ပါဝါ လိုးရှင်း " ကိုတော့ ယောင်္ကျားအင်္ဂါကို အမြဲ ဖြူဝင်း မွေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါများ ကူးခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် အင်္ဂါကြီးထွား သန်မာမှု ရှိရန် ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ထိန်းနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ❗️ 🔔🔔🔔 ♨️ အနံ့ အသက်လုံးဝ မရှိဘဲ သန့်ရှင်း မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ယောင်္ကျား တန်ဆာ ကိုမှ မိန်းမတွေက ခံစားမှု အပြည့်အဝ နဲ့ စိတ်ပါကြတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား ❓❓❓ 💪 ကြီးတာ သေးတာထက် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း ကျန်းမာမှု ရှိပြီး တဘက်သားရဲ့ ဆန္ဒ ကို အရင်ပြည့်ဝ ပေးနိုင်တဲ့ အထိ တောင့်ခံ နိုင်မှု ရှိဖို့က အရေးအကြီး ဆုံးပါ ❗️ 😳 ပါဝါ လိုးရှင်းကို စသုံးလိုက်တာနဲ့ ကူးစက်ရောဂါ အန္တရာယ် တွေအတွက် 99% စိတ်ချရမှာဖြစ်ပြီး တပတ်အတွင်း သင့် လိင်အင်္ဂါ အနံ့ အသက်ကင်းစင် မွှေးကြိုင်လာစေပြီး နဂိုထက် သိသိသာသာ ဖြူ ဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ❗️ 💁‍♂️ တစ်လ အတွင်း သုတ်လွှတ် မြန်တာကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပြီး ၆ လ ကနေ တစ်နှစ်အတွင်း သင့်လိင်အင်္ဂါ ကို ထွားကြိုင်း ရှည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ ⭐️ SKY LARK က တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ " ပါဝါ လိုးရှင်း " ကတော့100 % သဘာဝ ဆေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝ မရှိဘဲ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ လက်တွေ့ သိသာတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး အာမခံပေးနိုင်ပါတယ် ❗️👍 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 👨‍👩‍👧‍👦 ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကောင်းမွန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သုခ ကို ၂ ဘက်စလုံး ရကြဖို့ အထူး အရေးကြီးပါတယ် ❗️ ✌️အဲ့ဒီ အတွက် ၂ ဘက်စလုံးက အဓိက ဟာတွေ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဖို လိုအပ်ပါတယ် ❗️ 😎 ၂ ယောက်စလုံး အမြဲ သန်. ရှင်းမွှေးကြိုင်ပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှစ်လိုဖွယ် အဓိက ဟာတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ❓👇👇👇 💢💢 ပန်းသေ ပန်းညှိုး သုတ်လွတ်မြန်ခြင်း သွေးလည်ပတ်အား နည်းခြင်း များကို ရက်ပေါင်း ( 50 ) ၃ ဘူး သောက်ပြီး သွားသည်နှင့် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားစေပြီး အနည်းဆုံး (6) လ မှ တစ်နှစ်အထိ ဘာဆေးမှ မှီဝဲ နေစရာ မလိုတော့ဘဲ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး သွက်လက် လန်းဆန်းသော 20 ကျော်အရွယ် လူငယ်လေးလို ပေါ့ပါး အားရှိ စေမှာဖြစ်ပါတယ် ❗️6 လ ( သို့ ) တနှစ် နေမှ လိုအပ်ပါက One Course3ဘူး ထပ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ ကူညီပါရစေ ရှင် 15 Jan 2020 · 15M views
မင်းသမီး အောက်စလွတ်ပြီး ပေါင်ကြားမှာပေါ်နေတဲ့ဟာကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သူ အကောင်ဘဲ !
ဒီ ဗီဒီယို မှာ မင်းသမီး အောက်စလွတ်ပြီး ပေါင်ကြားမှာပေါ်နေတဲ့ဟာကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သူ အကောင်ဘဲ ! ========================= သင်လည်း ပါဝါလိုးရှင်းလိမ်း လေစုပ်ပြွန် နဲ့ ဆွဲပြီး ဒီလို သန်မာထွားကြိုင်းလို့ ရပြီနော် ! ============================= သင်လည်း ပျိုတိုင်း ခိုက်တဲ့ နှင်းဆီတိုင် ဖြစ်လို့ ရပြီနော် ! ခုဆို 1,000 ကျပ် ထဲနဲ့စော်ကြည်ဘဲလေး ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရနေပြီလေ ! ပါဝါလိုးရှင်း လိမ်းပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့၁၀ မိနစ်လောက် တစ်ရက် ၂ကြိမ် ဆွဲပေးရင် ၂ပတ်ဆို ရှယ် သိသာပြီ နော် ! လေစုပ်ပြွန်စက် - 33,000 ကျပ် ပါဝါလိုးရှင်း - 18,000 ကျပ် @@ သတိ - ဒီ ကြော်ငြာကို ကြည့် ပြီး ဆေးဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ရင် ဆေးဆိုင်တချို့ က သူတို့ အတွက် အမြတ်အများကြီး ပိုကျန်တဲ့ တရားဝင်မှတ်ပုံ မတင်ထားတဲ့ဆေးအတုတွေကို ပါဝါဟန်းနီး နဲ့ပါဝါလိုးရှင်း တွေထက်အများကြီး ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး လိမ်ရောင်းကြပါလိမ့် မယ် ။ ဆေးအတုတွေက 10,000 ကျပ်နဲ့ ရောင်း၇င် ဆိုင်သမားကို 6,000 ကျပ်လောက် အမြတ်ပေးကြတာလေ ! ခုဒီစာကို ဖတ်ပြီးရင်တော့" ငါအဲလောက်မအဘူး လို့သာ ရင်ကော့ပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါ ! " ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ဝယ်လို့ ရပြီ ! ################# ဒေါ်ရွှေခင်ဦး (ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်) 0618971673 ကို ဖုန်းဆက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်! ပါဝါဟန်းနီး ဘူး - 480 ဘတ် ပါဝါလိုးရှင်း ဘူး - 570 ဘတ် တခါသုံး ပါဝါဟန်းနီး - 30 ဘတ် တခါသုံး PH + PL အတွဲ - 55 ဘတ် =========%%%%%%%%%=============== အချစ် စစ် အချစ် မှန် နဲ့ တသက်လုံး သစ္စာရှိရှိ ချစ်ကြတဲ့ ယောင်္ကျားမြတ်တွေရဲ့ လက်စွဲ . . . 🌺" ပါဝါဟန်းနီး "🌺 သောက်ဆေး နဲ့ 🌹" ပါဝါလိုးရှင်းလေး "🌹လိမ်ဆေး ================================= 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🤐သတိ - ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ဖတ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းခြင်း မပြုပါရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည် ❗️❗️❗️ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🤓 အစ အဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်ပေးပါ ❗️👇👇 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💧 ဈေးနှုန်းများ 💧 ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်များ 💧 အမျိုးသားများအတွက် ဆေး အာနိသင်| ဆေး အသုံးပြုပုံ| ဆေး အကျိုးကျေးဇူးများ 💧 အမျိုးသမီးများအတွက် ဆေး အာနိသင်| ဆေး အသုံးပြုပုံ| ဆေး အကျိုးကျေးဇူးများ 💧 မြန်မာတပြည်လုံး မြို့များရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည့် ဆေးဆိုင်များ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 💰 16,000 ကျပ် 🚩 ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 💰 18,000 ကျပ် 🚩P-V Care Gel (ပီဗီကယ်ယား ဂျယ်လ်) 90ml - တဘူး 💰 18,000 ကျပ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☎️ ဖုန်းနံပတ်များ 🚩 ရန်ကုန်ရုံး > 09 256070900 | 09 424870011 🚩 မန္တလေးရုံး > 09 73206348 | 09 766005064 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 😳😳 ဆေး အာနိသင် သိသာမှု 😳😳 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🤨 လူငယ် လူကြီး တော်တော်များများဟာ ခုလုပ် ခုချက်ချင်းအစွမ်းပြ ဆိုတာတွေကိုသာ ပညာမဲ့စွာ ကြိုက်နေကြလို့ ကြီးဆေး ထိုးကြ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဗေဒ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းကြပြီး တစ်လလောက်ဘဲ သာယာမှုကိုရကြပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကို မရှုမလှ ခံစားနေကြရပါတယ် ❗️ 😌 အလကားပြောနေတာ လို့ ထင်နေရင် အဲဒါတွေကို စိတ်ကြိုက်ငွေကုန်ခံပြီး အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး ! နောက်ဆုံး ဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုးရောက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ စိတ်အလိုကျ ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် ခု ပိုမို အစွမ်းထက်အောင် ပြု ပြင်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 👇👇 ♦️ ပါဝါဟန်းနီး ♦️ ➖➖➖➖➖➖ 😳 ပထမ တစ်ရက် တစ်ဇွန်း သောက်လိုက်ရုံဖြင့် ထူးထူးခြားခြား သိသာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ ♨️" ပါဝါဟန်းနီး " သောက်သူတိုင်းက ဆေးကို အလွန်ကြိုက်ကြပြီး အနံ့ နဲ့ အဝင်ဆိုးတာ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလာကြသူတွေ ရှိလို့ အခု အ နံ့ မွှေးပြီး အရသာလေးကောင်းအောင် ပြန်ပြု ပြင်ထားပါတယ်နော် ❗️ ♦️ ပါဝါလိုးရှင်း ♦️ ➖➖➖➖➖➖ 💁‍♀️ လိမ်းဆေးကို အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ ! ဘေးထွက် ဆိုကျိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ 100 % သဘာဝ ဆေးဖြစ်လို့ ခုလိမ်း ခုချက်ချင်းတော့ ဖြစ်မလာပါဘူး! ဒါပေမဲ့ ၆ လ နဲ့ ၉ လ အတွင်း သင်မှန်းပြီး လိုချင်နေတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး စွမ်းရမယ် ဆိုတာတော့ လုံးဝ အာမခံပါတယ် ❗️ 😇 တစ်သက်လုံး ဘေးကင်းပြီး စိတ်တိုင်းကျ သာယာ နိုင်ဖို့ ၉ လ လောက် အချိန်ပေးရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲ တွက်တွက် တန် မှတန် ပါဘဲ ❗️ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ပါဝါ ဟန်းနီး (100 % သဘာဝ ဆေး ) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ♦️ ************************************************ ■ ပန်းသေ ပန်းညိုး ပျောက်စေပါသည် ။ ■ သုတ်လွှတ် မြန်ခြင်းကို ပျောက်စေပါသည် ။ ■ ခြေဖျားမှ ဦးနှောက်အထိ ရှိသမျှ သွေးကြော အားလုံးတွင် သွေးကို လျှောက်စေသောကြောင့် အကြောအားနည်းသူများ ပိုလီယို ရောဂါ ခံစားနေရသူများ နှင့် တခြမ်းလေဖြတ် အောက်ပိုင်းသေနေသူများ ပုံမှန် အသုံးပြုပေးပါက ရောဂါ သက်သာစေရန် များစွာအထောက်အကူ ပြုသည် ။ ■ သုတ်ကောင်အရည်အတွက် ပွားစေပြီး သုတ် အရည်အသွေးကိုပါ မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကျန်းမာ သန်စွမ်း ဥာဏ်ကောင်းသော ကလေးရလိုသူများ Course အလိုက် မှီဝဲ နိုင်ပါသည် ။ ■ သွေးကို တကိုယ်လုံးတွင် ကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးသဖြင့် စိတ်ပါသလောက် ကိုယ်က လိုက်ပါ ပြီး မမောတမ်း တခါပြီးတခါ ဆက်တိုက် စွမ်းဆောင် နိုင်သည် ။ ■ ဆက်ဆံ နေစဉ် ယောင်္ကျား အဂါင်္ ကို တောင့်တင်း သန်မာ ထွားစေသည် ။ ■ ဦးနှောက်တွင်း အနှံ့ သွေးကိုရောက်စေသဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကိုပါမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် လူ ကိုယ် ကိုသာမက စိတ်ဓာတ် ကိုပါ ယောင်္ကျား ပီသစေပါသည် ။ ■ ဆီးကြိတ် ရောင်သူများ Course အတိုင်း မှီဝဲပါက ရောဂါ ကို အထူးသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ လုံးဝ မသောက်သုံးရ ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ပါဝါ လိုးရှင်း (100 % သဘာဝ တိုင်းရင်းဆေး ) ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ♦️ ************************************************ ■ အမျိုးသား လိင်အဂါင်္ ပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လိင်အဂါင်္ အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး လိင်အဂါင်္ အတွင်းရှိ သွေးအိတ်ထဲသို့သွေးအပြည့် ရောက်စေသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ လိင်အဂါင်္ ကို နဂိုထက် ပိုကြီးထွားလာစေပါသည် ။ ■ လိင် ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ ကူးစက်ခြင်းမှ 95% ကာကွယ်ပေးပါသည် ။ ■ လိင်တံကို အမြဲ သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေစေပြီး ဖြူဝင်းလာစေသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) ၏ နှစ်လိုဖွယ် ယုယုယယစိတ်ပါ ဝင်စားစွာဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းကို ခံရပါမည် ။ ■ ဤ လိမ်းဆေးကို စား၍ ရသော ဆေးဘက်ဝင် သဘာဝ ပစ္စည်း များဖြင့်သာ ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် မိမိအားပြုစုပေးသော ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ( အမျိုးသမီး / ချစ်သူ ) မှပြုစုပေးနေစဉ် တံထွေး မျုို ချ မိပါက ဤ ဆေး သည် ၄င်း ( အမျိုးအမီး / ချစ်သူ ) ၏ ဓမ္မတာ ကို မှန်စေသွေးအားကောင်းစေပြီး သားအိမ်ကို သန့်စေပါသည် ။ အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်စေပါသည် ။ ■ အကြောထိန်းအားကိုလည်း ကောင်းမွန်လာစေသောကြောင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ■ လေဖြတ်ထားသူများ လေဖြတ်ထားသည့် လက် / ခြေတောက် များတွင် တရက် ၃ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးပါက နဂို ပုံမှန် ပဂတိ အခြေအနေမျိုးပြန်ဖြစ်လာအောင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည် ။ ■ တစ်လ တစ်ကြိမ် တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ့ လိမ်းပေးပါက လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင် အထူး ကာကွယ် ပေးပါသည် ။ ■ ပိုလီယို ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း လိုအပ်သော နေရာတွင် လိမ်းကာ အသုံးပြုပါက နဂိုထက် သိသိသာသာ ထူးခြား သိသာလာမည် ဖြစ်ပါသည် ။ ■ အကြောညှပ်ခြင်း ၊ အကြောကပ်ခြင်း ၊ ကျင်ခြင်း ၊ ထုံခြင်း ၊ လက်ပြင်ကြောလွဲခြင်း ၊ ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ■ ယောင်္ကျား အဂါင်္ အကြောအားနည်းခြင်းအတွက် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ■ ကျန်ရောဂါများ အတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ တနေ့ ၃ ကြိမ်မှန်မှန် လိမ်းပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013089 (0118) နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါလိုးရှင်း 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013306 ( 0819 ) နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 (ပါဝါဟန်းနီး) ဆေးမှီဝဲရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❣️မည်သည့် ရောဂါ အတွက်မဆို ဆေးပတ်လည်စေရန် တခါသောက်ရင် ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး = One Course ပြည့်အောင် သောက်သုံးရပါမည် ။ ❣️ဘူးအတွင်းတွင် ဇွန်း ပါပါသည် ။ ပထမ တဘူး တရက် တဇွန်း ( ညသောက်လျှင် နေ့ တိုင်း ည ၊ မနက်သောက်လျှင် နေ့တိုင်း မနက် ) ၁၀ ရက် ဆက်တိုက် သောက်ရပါမည် ။ ဒုတိယ နှင့် တတိယ ဘူးများကို တရက် ခြားဆီ သောက်ရပါမည် ။ ❣️ One Course3ဘူး သောက်ပြီးလျှင် မိမိ မူလ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၆ လ မှ အများဆုံး တနှစ်ထိ မည်သည့်ဆေးမှ မှီဝဲ စရာ မလိုတော့ပါ ! ❣️ ပိုလီယို ရောဂါ နှင့် ဆီးကြိတ် ဝေဒနာ ရှင်များ လည်း အထက်ပါ အတိုင်း ရွှေ ရောင်ဘူး ၃ လ အဖြူရောင်ဘူး ၃ လ ဆက်တိုက် တလှည့်စီ စွဲ သုံး နိုင်ပါသည် ။ ❣️ အလွန် အားနည်းနေသူများ ရွှေရောင်ဘူး One Course သောက်ပြီး ၃ လ အထိ အြ 🚦မှတ်ချက် >> လိင် အဂါင်္ ထွားလိုသူများ ရွှေရောင်ပ ပါဝါဟန်းနီ3းဘူး သောက်နေစဉ် ပါဝါလိုးရှင်း2ဘူး ကုန်အောင်တွဲလိမ်း အသုံးပြုပေးပါရန် ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 (ပါဝါလိုးရှင်း) ဆေးသုံးရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌷 အရေပြားလှန်ပြီး လိင်တံနှင့်ဝှေးစေ့တို့ကို ဆပ်ပြာဖြင့် သေသေချာချာဆေးပြီး ခြောက်အောင်သုတ်ပါ ။ ညှစ်ပန့်ကိုနှိပ်ပြီး လက်ဖဝါးပေါ်သို့ လိုးရှင်းအနည်းငယ်ယူပြီး ဝှေးစေ့နှင့်လိင်တံအနှံ့ သေချာစွာနှိပ်ပြီး လိင်တံကို အောက်ဘက်သို ဆွဲချကာ ဆေးစိမ့်ဝင်သွားသည့်အထိ (၁၅) မိနစ် ၀န်းကျင်လောက် လိမ်းပါ ။ မနက် နေ့လည် ည တစ်ရက် ၃ ကြိမ် (၂ လ) အထိ လိမ်းပေးပါ ။ 🗣 လိင်တံ ကို တရက် ၃ ကြိမ် လိမ်းရန်သာ အသုံးပြုပါက ပါဝါလိုးရှင်း တဘူး တစ်လ အသုံးခံပါသည် ။ ပထမဆုံး စအသုံးပြုသူများ ပါဝါဟန်းနီ3းဘူး One Course သောက်နေစဉ် ရက် ၅၀ အတွင်း ပါဝါလိုးရှင်း 2ဘူးကိုပါ တွဲလိမ်း သုံးပေးပါ ။ သို့မှသာ ဤ ၂ ဘူး ကုန်သည့်အခါ သင့် လိင် အဂါင်္ သိသိသာသာ ကြီးထွား လာပါမည် ။ နောက်ပိုင်း ဆက်သုံးလိုပါက ပါဝါဟန်းနီး သောက်ရန် မလိုတော့ဘဲ လိုးရှင်း ချည်း သက်သက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ယခုမှ စအသုံးပြုသူများ လိုးရှင်း တခုတည်းသာ သုံးပါက သိသိသာသာ ထူးခြားမှု နည်းပါသည် ။ ၂ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ရှည်လာ တုတ်လာတာ မြင်ချင်ရင်တော့ လိုးရှင်း လိမ်းပြီးရင် လေစုပ်ပြွန်စက်နဲ့တခါဆွဲရင် ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ရက် ၂ကြိမ် လိုးရှင်းလိမ်း ဆွဲ ပေးပါ ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ ယောင်္ကျားများအတွက်♦️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌐 ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက် ၂၀ နဲ့ ၄၀ ကြား လူငယ် 20% နဲ့ အသက် 40 နဲ့ 60 ကြား လူလတ်ပိုင်း 80% တွေဟာ ယောင်္ကျား ဟိုမုန်းဓာတ် မှတ မှန်ကန်မှု မရှိကြတဲ့အတွက် ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရပါတယ် ❗️ 😔 အသက် ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဲလို ဖြစ်နေကြသူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း ၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ၊ လူတောမတိုးရဲခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို အားမရခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ်စိတ်မဝင်စားခြင်း စတာတွေ ကို ပါ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ခံစားနေကြရပြီး ထွက်ပေါက်တွေ အနေနဲ့ တချို့က လောင်းကစားသမား ၊ တချို့က အရက်သမား ၊ တချို့ က မိန်းမ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ကောင်းလာမလားဆိုပြီး KTV , Club တွေ မှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန် ဖြုန်းသူတွေ ဖြစ်လာကြရုံမက တချို့က စိတ်ဓာတ်တွေ တအားကျပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သွားကြတဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ အများကြီး ရှိပါတယ် ❗️ 💁‍♂️ တချို့ ယောင်္ကျားတွေက ကျန်တာတွေ အကုန်ကောင်းနေပြီး သုတ်ရည်မှာ သုတ်ကောင်အရေအတွက်ပါဝင်မှု နည်းနေလို့ ကလေး မရနိုင်တာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ❗️ ⭐️ ခု SKY LARK က တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထုတ်တဲ့ 100% HERBAL ( သဘာဝ ) တိုင်းရင်းဆေး " ပါဝါဟန်းနီး " က အထက်ဖော်ပြပါ ဝေဒနာ တွေ ကို ဘာမှဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကောင်းတလက်ပါ ❗️ "ပါဝါ လိုးရှင်း " ကိုတော့ ယောင်္ကျားအင်္ဂါကို အမြဲ ဖြူဝင်း မွေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါများ ကူးခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် အင်္ဂါကြီးထွား သန်မာမှု ရှိရန် ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ထိန်းနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ❗️ 🔔🔔🔔 ♨️ အနံ့ အသက်လုံးဝ မရှိဘဲ သန့်ရှင်း မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ယောင်္ကျား တန်ဆာ ကိုမှ မိန်းမတွေက ခံစားမှု အပြည့်အဝ နဲ့ စိတ်ပါကြတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား ❓❓❓ 💪 ကြီးတာ သေးတာထက် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း ကျန်းမာမှု ရှိပြီး တဘက်သားရဲ့ ဆန္ဒ ကို အရင်ပြည့်ဝ ပေးနိုင်တဲ့ အထိ တောင့်ခံ နိုင်မှု ရှိဖို့က အရေးအကြီး ဆုံးပါ ❗️ 😳 ပါဝါ လိုးရှင်းကို စသုံးလိုက်တာနဲ့ ကူးစက်ရောဂါ အန္တရာယ် တွေအတွက် 99% စိတ်ချရမှာဖြစ်ပြီး တပတ်အတွင်း သင့် လိင်အင်္ဂါ အနံ့ အသက်ကင်းစင် မွှေးကြိုင်လာစေပြီး နဂိုထက် သိသိသာသာ ဖြူ ဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ❗️ 💁‍♂️ တစ်လ အတွင်း သုတ်လွှတ် မြန်တာကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပြီး ၆ လ ကနေ တစ်နှစ်အတွင်း သင့်လိင်အင်္ဂါ ကို ထွားကြိုင်း ရှည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ ⭐️ SKY LARK က တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ " ပါဝါ လိုးရှင်း " ကတော့100 % သဘာဝ ဆေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝ မရှိဘဲ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ လက်တွေ့ သိသာတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး အာမခံပေးနိုင်ပါတယ် ❗️👍 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 👨‍👩‍👧‍👦 ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကောင်းမွန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သုခ ကို ၂ ဘက်စလုံး ရကြဖို့ အထူး အရေးကြီးပါတယ် ❗️ ✌️အဲ့ဒီ အတွက် ၂ ဘက်စလုံးက အဓိက ဟာတွေ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဖို လိုအပ်ပါတယ် ❗️ 😎 ၂ ယောက်စလုံး အမြဲ သန်. ရှင်းမွှေးကြိုင်ပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှစ်လိုဖွယ် အဓိက ဟာတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ❓👇👇👇 💢💢 ပန်းသေ ပန်းညှိုး သုတ်လွတ်မြန်ခြင်း သွေးလည်ပတ်အား နည်းခြင်း များကို ရက်ပေါင်း ( 50 ) ၃ ဘူး သောက်ပြီး သွားသည်နှင့် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားစေပြီး အနည်းဆုံး (6) လ မှ တစ်နှစ်အထိ ဘာဆေးမှ မှီဝဲ နေစရာ မလိုတော့ဘဲ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး သွက်လက် လန်းဆန်းသော 20 ကျော်အရွယ် လူငယ်လေးလို ပေါ့ပါး အားရှိ စေမှာဖြစ်ပါတယ် ❗️6 လ ( သို့ ) တနှစ် နေမှ လိုအပ်ပါက One Course3ဘူး ထပ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ 💢💢 အလွန် အားနည်းပြီး နှစ်ရှည်ကြာ ပန်းသေ ပန်းညှိုး ဖြစ်နေသူများ ရွှေရောင်ဘူး ၃ ဘူး One Course သောက်ပြီးပါက အဖြူ ရောင်ဘူး One Course သောက် ရပါမည် ။ လိုအပ်သေးပါက အထက်ပါအတိုင်း တလှည့်စီ ၃ ကြိမ်ထိ သောက် နိုင်ပါသည် ❗️ ပြောတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရင် ငွေပြန်အမ်း ပါ့မယ် ! ဒီလောက်သေချာတဲ့ အာမခံချက်ကို သင့်ကို ဘယ်ဆေးက ပေးနိုင်ပါလဲ ❓❓❓ အာမခံချက် အပြည့် အဝ ပေးထားလို့ခုဘဲ ဖုန်းဆက် စမ်းသုံး ကြည့် လိုက်ပြီး သင့်ဘဝ ထဲ က I can't ကို I can ဖြစ်သွား အောင် လုပ်လိုက်ပါလား မိတ်ဆွေ ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 🌺 အမျိုးသမီးသုံး PV Care Gel 🌺 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 014510 ( 1221 ) နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ တစ်ဘူး ဆိုရင် ၂ လ သုံးလို့ရပြီး ရောင်းဈေးက တစ်ဘူးကို 18000 ကျပ် ပါ ❗️ 🥀လိမ်းရင် ရရှိနိုင်မဲ့ အကျိုးကျေးဇူး🥀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌹အမျိုးသမီး အဂါင်္ကို အမြဲ မွှေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါ ကင်းစေပါတယ် ! အဖြူဆင်းတာ အနံ့အသက် ထွက်တာတွေ လုံးဝ မဖြစ်တော့ပါဘူး ❗️ 🌹 လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်တက်တဲ့ ရောဂါတွေ မဖြစ်ဖို့ 90% ကာကွယ်ပေးပါတယ် ❗️ 🌹 လျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းနံရံတွေ အတွင်းနဲ့ အပြင်မှာ မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးရုံနဲ့ (45) ရက်အတွင်း အပျိုစင်လေးလို ပြန်လည် တင်းရင်းစေမဲ့ အခြေအနေလေးကို ပြန်ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹 အမျိုးသမီး အဂါင်္အတွင်း PH Level ကို အမြဲတမ်း 4.5 မှာ ထိန်းညှိပေးထားမှာ ဖြစ်လို့ အခြား ဘာ PH Care မှ သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး ❗️ 🌹 သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းမှလည်း 95% လောက် ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ 🌹 ကိုယ့် ယောင်္ကျား ၊ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်ကလွဲလို့ တခြားဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်မဝင်စား နိုင်လောက်အောင်ကို စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹အိမ်ထောင် မရှိတဲ့ အပျိုတွေ သုံးရင် အသက်ကြီးလာသည်အထိ တင်းရင်းပြီး အနံ့အသက် ကင်းစင် ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရနိုင်တဲ့ရောဂါ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း တွေကိုလည်း ၉၅ % လောက် ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 P V Care Gel (ပီဗီကယ်ယား ဂျယ်လ်) ဆေးသုံးရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌸 ကလေး မွေးပြီး တစ်လကျော်ရင် စသုံးလို့ ရပါပြီ ! 🌸 အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အတွင်းဘက် နံရံတွေကို လက်ညိုးနဲ့ ဆေးအနှစ် နည်းနည်းယူပြီး သုတ်လိမ်းပေးရပါမယ် ! ပြီးရင် အပြင်ဘက်ပါ အနည်းငယ်လိမ်းလိုက်ပါ။ မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ ကြိမ် လိမ်းရပါမည် ! နောက်တစ်ကြိမ် မလိမ်းမှီ ပထမ တစ်ကြိမ် လိမ်းထားပြီးသားကို ရေနဲ့ ဆေးချရပါမယ် ! ဆိုလိုတာက နေ့စဉ် … မနက် လိမ်းထားတာကို ည ကျရင် ဆေးချ ၊ ည ပြန်လိမ်း။ ည လိမ်းထားပြီးသားကို မနက် ပြန်ဆေး၊ ပြီးရင် တခါထဲ မနက် ပြန်လိမ်းပါ။ 🚦မှတ်ချက်။ ။ ရာသီလာချိန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လုံးဝ မလိမ်းရပါ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ မိန်းမများအတွက် ♦️ ➖➖➖➖➖➖➖ 🌐 ကမ္ဘာတဝှမ်း အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေကြတာကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း နှင့် ယောင်္ကျား များနှင့် ဆက်ဆံ ခါ များလာသည့်အခါ အင်္ဂါ တွင်း နံရံများ ရော့တွဲလာကြသဖြင့် မိမိခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိတော့ခြင်း စတာတွေက အဖြစ်များနေကြပါတယ် ! 🤱 ကလေး မွေးတဲ့အခါ ရိုးရိုးမွေးပြီးတော့ ပြန်ချုပ်ထားရင်လည်း အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းသားတွေဟာ ပျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်သွားလို့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားမှု အပြည့်အဝ မပေးနိုင်ကြတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ် ❗️ 🤦‍♀️ အဲ့လိုအခါမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသားရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ တွေ့ကြုံရတက်ပါတယ် ❗️ 🙅‍♀️ အဲ့လို အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ မဖြစ်ကြရအောင် အမျိုးသမီးတွေ ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း အပျိုစင်လေး တစ်ယောက်လို မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေး သုခ အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ကြပြီး အိုမင်းသည်အထိ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်အောင် SKY LARK က စေတနာ မေတ္တာအပြည့်အ၀နဲ့ အမျိုးသမီး သုံး P V Care Gel ( ပီဝီ ကယ်ယား ဂျယ်လ် ) ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ပြီး 11 လ ပိုင်း 2017 မှ ဈေးကွက်ထဲ စတင် ရောင်းချပေး နေပါတယ် ! နောက်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ P - V Care နဲ့အတူ အမျိုးသမီး အင်္ဂါက အမွှေးတွေကို သဘာဝ နည်းနဲ့ အမြဲအတွက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့ P-V clean အမွေးဖယ်ရှားဆေး ကိုပါ လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ ဒါမျိုး သောင်းချီတန် ဆေးတွေ သိန်းချီဖိုး အခမဲ့ အစမ်းပေးသုံးပြီး လက်တွေ့သိသာမှုတွေကို အင်တာဗျူး မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ရဲရဲကြီးချ ပြနိုင်တာ မြန်မာ့ဆေးသမိုင်းမှ SKY LARK ကလွဲလို့ မှတပါး အခြား လုံးဝ မရှိ ပါဘူး ! အိမ်ထောင်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်ထိ ဆေးအမျိုးမျိုးသုံး နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ကုခဲ့ပေမဲ့လည်း သားသမီးရတနာ မထွန်းကားခဲ့ တစ်ဦး ဆေးအစမ်း လာသောက် / လိမ်းရင်း အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန် ရသွားပါတယ် ! 2016 မှာ မန္တလေးတွင် လုပ်ခဲ့ပြီး 2017 မှာ ရန်ကုန်တွင် လုပ်ခဲ့ပါတယ် ! 2018 မှာ မော်လမြိုင်တွင် လုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ် ! ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်လို့ ဆေးဆိုင်တွေမှာလည်း ဝယ်လို့ ရတယ်နော် ! 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ဝယ်လို့ ရပြီ ! ################# ဒေါ်ရွှေခင်ဦး (ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်) 0618971673 ကို ဖုန်းဆက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်! POWER HONEY ဘူး - 480 ဘတ် POWER LOTION ဘူး - 570 ဘတ် တခါသုံး POWER HONEY - 30 ဘတ် တခါသုံး PH + PL အတွဲ - 55 ဘတ် 📣 မလေးရှားတွင် ဆက်သွယ်ရမည့် Contact 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🗓 စတင်ဝယ်ယူရန် ရသည့်နေ့ - 10 - 10 - 2016 💁‍♂️ POWER HONEY = 80 RM , POWER LOTION = 105 RM ☎️ 1) Malaysia Damansara Jaya Ph - 01129043746 | 2) Malaysia Klang Ph - 0173031835 📣 ရန်ကုန်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🏠အိမ်အရောက်ပို့ မှာယူလိုပါက 👇👇 💰ဝန်ဆောင်ခ - 1500 ကျပ် ☎️ ဖုန်းနံပတ် - 09 256070900 | 09 424870011 *************************************************** ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 သရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၆၁ (င) ၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင် အနီး ၊ 095311334 ။ ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 တိုကျို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၀ ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ 01 510921 ။ ♦️လှိုင် 👉🏾 ရွှေသရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၃/၈၄ ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ဘူတာရုံလမ်း ၊ သုခ မှတ်တိုင် ၊ 01 516438 ။ 💜 ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 🔈မင်္ဂလာဈေး ၊ ဆိုင်အမှတ် B 50-51 ၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး ဒုတိယထပ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ 09 421007783 ။ 💙 ကောင်းသန့် ဆေးဆိုင် 🔈 ၂၉ လမ်း ၊ ၈၃ - ၈၄ လမ်း ၊ မန္တလေးမြို့ ၊ 09 783000277 ။ 🔹 ကမာရွတ် 👉🏾 အိန်ဂျလာ Beauty Saloon 👈🏾 တိုက်အမှတ် ၁ ၊ အမှတ် ၁ ၊ အောင်မြင်သာစည် အိမ်ရာ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ Ph - 09 792233119 ။ 🔹 စမ်းချောင်း 👉🏾 ခိုင်မာလာနှင်းဆီ Beauty Saloon 👈🏾 မင်းလမ်း ။ 🔹 တာမွေ 👉🏾 Beaut'e9 Beauty Saloon 👈🏾 အမှတ် ၃၂ ဩဘာလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊ Ph - 09 421021369 ။ 🔹ဗဟန်း 👉🏾 Thiri Goldencrown Beauty Saloon 👈🏾 အမှတ် ၁၂ ၊ မြလမ်း ၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက် ။ 🔹 မရမ်းကုန်း 👉🏾3- COLORS Saloon 👈🏾 အမှတ် ၃ အုတ်ပုံစိန်လမ်း ၊ လမ်းဝ မှတ်တိုင် ၊ နဝဒေး ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၊ မရမ်းကုန်း ၊ Ph 09 404242118 ။ 🔹 လှိုင် 👉🏾 UNIQUE III Beauty Saloon 👈🏾 အမှတ် 38 ၊ A -B1 ၊ ပါရမီလမ်း ၁၆ ရပ်ကွက် ၊ စိန်ဂေဟာရှေ့ ။ 🔹 သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 VRS Beauty Saloon 👈🏾 သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ဇဝန ဂျမ်းရှင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ။ 🔹 မြောက်ဒဂုံ 👉🏾 ပန်းနု Beauty Saloon 👈🏾 ပင်လုံလမ်း ၊ ၃၅ ရပ်ကွက် ၊ Capital အနီး ။ 🔹 မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မခိုင် Beauty Saloon 👈🏾 အမှတ် ၅၈၂ ၊ သုနန္ဒာ ၆ လမ်းဆုံ ၊ ဇ ရပ်ကွက် ၊ Ph - 09 760967761 ။ ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 ဆရာမ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၃ ၊ ထန်းတပင်လမ်း ၊ ဆရာမ ဆေးဆိုင် ၂ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင် ၊ 09 771136091 ။ ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 မဟာသုခံ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၃၈ ၊ ခိုင်ရွှေဝါ ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ ခိုင်ရွှေဝါ မှတ်တိုင် ၊ 01 505071 ။ ♦️ ကမာရွတ် (လှည်းတန်း) 👉🏾 ကိန္နရီစတိုး 👈🏾 ♦️ ကမာရွတ် (လှည်းတန်း) 👉🏾 ဥမ္မာစတိုး 👈🏾 ♦️ စမ်းချောင်း (မြေနီကုန်း) 👉🏾 မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 မြေနီကုန်း ပန်းခြံ ထဲ ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 Easyshop 👈🏾 ယုဇန ပလာဇာ ၊ တတိယထပ် ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 VICTORIA 👈🏾 Near Excel ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 ခရေရိပ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 တိုက် ၂၇ ၊ ဈေးဟောင်းလမ်း ၊ အခွန်လွတ်ဈေးအနီး ၊ 01 555904 ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 ချိုမေတ္တာ ဆေးခန်း နှင့် ဆေးမျိုးစုံ 👈🏾 ဗညားဒလ လမ်း ၊ အောင်မင်္ဂလာ မှတ်တိုင်အနီး ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 ပထမထပ်မှ အလှကုန် ဆိုင်များ 👈🏾 ယုဇန ပလာဇာ ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 ရွှေကမ္ဘာ 👈🏾 ယုဇန ပလာဇာ ၊ ဒုတိယ ထပ် ။ ♦️ တာမွေ 👉🏾 ရွှေစင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၄၄ ကျားကွက်သစ်လမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ။ ♦️ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 👉🏾 ရှိုင်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၀၀၄ ၊ တိုက် ၁၁/၅လမ်း ၊ ယုဇန ဥယျာဉ် အိမ်ရာ ။ ♦️ ပန်းဘဲတန်း 👉🏾 စု မိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၂၉ လမ်း ၊ အောက်ဘလောက် ၊ ကုန်သည်လမ်းထိပ် ၊ လမ်း ၃၀ မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 250045436 ။ ♦️ ပန်းဘဲတန်း 👉🏾 ဆေးကမ္ဘာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂၇၇ ၊ ရွှေဘုံသာ အလယ်လမ်း ၊ 09 420108312 ။ ♦️ ပုဇွန်တောင် 👉🏾 ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် 9/17 ၊ အနော်ရထာလမ်း ။ ♦️ ပုဇွန်တောင် 👉🏾 ရွှေပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၉၅ ၊ ရေကျော်လမ်း ၊ ပုဇွန်တောင်ဈေး မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 421025453 ။ ♦️ ကြည့်မြင့်တိုင် 👉🏾 ငြိမ်း အာယုသာဆေးဆိုင် 👈🏾 သရက်တောလမ်းမကြီးဘေး ၊ ကွမ်းယာဆိုင် မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 420111602 ။ ♦️ ကြည့်မြင်တိုင် 👉🏾 သပြေ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ ဘူတာရုံ မှတ်တိုင် အနီး ။ ♦️ ဗဟန်း 👉🏾 စံပယ်ဖြူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 ရွှေဂုံတိုင် ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်းထောင့် ၊ အောင်တော်မူ ဘုရားရှေ့ ၊ ဗိုလ်စိန်ပင့် ရပ်ကွက် ၊ 09 5032903 ။ ♦️ ဗဟန်း 👉🏾 ဆင်မင်း ဆေးနှင့်စတိုး 👈🏾 အမှတ် ၃၁၁ ၊ ဗဟန်းဈေး ၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်အနီး ၊ 09 420145611 ။ ♦️ မင်္ဂလာဒုံ 👉🏾 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အောင်စေ ဘုရားလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက် ။ ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 သီရိ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သမိုင်း လမ်းဆုံ ။ ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာရိပ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀ မိုင်ကုန်း ၊ ဈေးတာဝန်ခံ ရုံးရှေ့ ။ ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာဦး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၆ ၊ ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း ၊ ၃ ရပ်ကွက် ။ ♦️ ရန်ကင်း 👉🏾 စံဆေးဆိုင် 👈🏾 126 ဘေး ၊ ရန်ကင်းစင်တာ ရှေ့ ။ ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 Asialight Marts 👈🏾 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 SUPER ONE 👈🏾 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 စိန်ဂေဟာ 👈🏾 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 မိသားစု Mart များ အားလုံး 👈🏾 ♦️ လမ်းမတော် 👉🏾 ထွန်းမြင့်ဦး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၇၆၅ ၊ မဟာ ဗန္ဓုလလမ်း ၊ လမ်းမတော် ။ ♦️ လမ်းမတော် 👉🏾 အာယုဒီဃအသက်ရှည်ဆေး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အနော်ရထာလမ်းမကြီး ၊ ၁၁ လမ်း ၊ အပေါ်လမ်း ၊ 09 779727137 ။ ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ပွင့်သစ်ထွန်း (၃) ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မီးခွက်ဈေး ၊ အ.မ.က ၂၂ ကျောင်းရှေ့ ။ ph:09420024670 (2)ရွှေမေတ္တာဆေးဆိုင် ပင်လုံဈေး စစ်တွေလမ်း ph:09420024670 ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ရွှေရင်အေး ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၆၁၇ ခ ၊ အလောင်းဘုရားလမ်း ၊ ၁၉ ရပ်ကွက် ။ ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 AAA ဆေးဆိုင် 👈🏾 Junction ဇဝန အနီး ။ ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 လပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 စံပြ ၃ လမ်း ၊ စံပြဈေး အနီး ။ ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၇၉ ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ ဘဝမြင့် ၊ လေးထောင့်ကန် ရပ်ကွက် ။ ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း (သုဝဏ္ဏ) 👉🏾 ဆွေမဟာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 ရေနသာလမ်း ၊ ရေနသာဈေးရှေ့ ၊ ၂၄ ရပ်ကွက် ၊ ရေစက်မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 5403809 ။ ♦️ သန်လျင် 👉🏾 ချမ်းမြေ့ ဆေးနှင့်စတိုး 👈🏾 အမှတ် ၁၃ ၊ ရွှေသရက်လမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာမှတ်တိုင် ၊ 09 428116002 ။ ♦️သန်လျင် 👉🏾 လေဆာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သံလျင်ဈေး အပြင်ဘက်တန်း ၊ ORANGE ဘက် အခြမ်း ။ ♦️ သာကေတ 👉🏾 စိန်စီ ဆေး နှင့် စတိုး 👈🏾 3B ဧရာဝဏ် လမ်း ၊ သာကေတအဝိုင်း အနီး ။ ♦️ သာကေတ 👉🏾 လပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂၄ ၊ နဝရတ် ၁၁ လမ်း ၊ ၉ ရပ်ကွက် ၊ 09 758188763 ။ ♦️ အင်းစိန် 👉🏾 မိုးသောက်ပန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၆၁ ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန်မှတ်တိုင် အနီး ။ ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ အင်းစိန် လမ်းမ ။ ♦️ အလုံ 👉🏾 ဇဝန ဆေးဆိ်ုင် 👈🏾 ၃၅ မြေညီ ၊ ဝေဘာဂီလမ်း ၊ စာတိုက်မှတ်တိုင် ၊ 09 965143415 ။ ♦️ အလုံ 👉🏾 ထိပ်တန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၇၉ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ။ ♦️ အရှေ့ဒဂုံ 👉🏾 သက်စောင့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂ ဈေး ၊ ၈ ရပ်ကွက် ၊ ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 440737309 ။ ♦️ အရှေ့ဒဂုံ 👉🏾 စေတနာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၃၃ ၊ ဈေးလမ်း ၊ ၁၃၃ မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 450494918 ။ ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾3Star ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၅၇ ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ၊ အောက်ဘလောက် ၊ 01 379716 ။ ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 AA Pharmacy 👈🏾 ဆူးလေဘုရား အနီး ။ ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 SUPER STAR ဆေးဆိုင် 👈🏾 ကုန်ဈေးတန်းလမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းဒေါင့် ။ ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 ဦးကျော်ခင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၅၈ ၊ ဆိပ်ကမ်းသာ အထက်လမ်း ၊ 09 777411694 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 သင့်မြတ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၁၈ ၊ စည်ပင်လမ်း ၊ ၁၉ တောင်ဒဂုံ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 965194825 ။ ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 ရွှေစင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀၅၇ မောင်းမကန်လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံ တံတားထိပ် မှတ်တိုင် ။ ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 အောင်စည်ဟိန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 မင်္ဂလာရာမလမ်း ၊မင်းကွန်း ဈေးနား ။ 09 965193285 ♦️ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 👉🏾 ရှိုင်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် 004 တိုက် 11 ,5လမ်း , ယုဇန ဥယျဉ် အိမ်ယာ 09 421078241 ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဗိုလ်စံ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၉၂ ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း ၊ ၅ ရပ်ကွက် ၊ 01 577496 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဖြိုးမိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇၈ / ခ ၊ မေတ္တာလမ်း ၊ ၁၀ ရပ်ကွက် ၊ ၁၃ ဈေးရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 426133361 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မင်္ဂလာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၀၇ ၊ ရုံ ၁ ၊ နန္ဒဝန်ဈေး ။ ♦️ ဒေါပုံ 👉🏾 ပွင့်ကို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂ ၊ ယမုံနာ ဆိုင်ခန်း ၊ မြို့ နယ်တရားရုံး ရှေ့ ။ ♦️ မြောက်ဒဂုံ 👉🏾 ဇီဝ ဆေးဆိုင် 👈🏾 မဟာရန်ကုန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ၊ ၄၁ တိုးချဲ့ ရပ်ကွက် ၊ မဟာမြိုင် အိမ်ယာ ။ ♦️ မြောက်ဒဂုံ 👉🏾 လူထုမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း ၊ ကျောင်းလမ်း မှတ်တိုင် အနီး ၊ 09 995181363 ။ ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ကိုတင်စိုး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အာသာဝတီလမ်း ၊ ၂ ရပ်ကွက် ။ ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဆုမြတ်ထက် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၃၆၈ မေဓာဝီ လမ်း ၊ စက္ကဝတ် လမ်းထိပ် ၊ ( ဈ ) ဈေး ။ ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မြင့်စေတနာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇ ၊ ဝေဟင်လမ်း ၊ ဝေဘာဂီ ၄ ရပ်ကွက် ၊ အနန်းပင် ဈေးအနီး ၊ 09 790196929 ။ ♦️ ရွှေပြည်သာ 👉🏾 ဇီဝက ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့ ။ ♦️ ရွှေပြည်သာ 👉🏾 ဝိုင်းဝိုင်းလည် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၃ ဈေး ၊ မြင်းလှည်းဂိတ် မှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 420105663 ။ 🍄 မှော်ဘီ 🍁 နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဆတ်သွားတော ၊ မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ။ 🍄 မှော်ဘီ 🍁 မိုးစတား ဆေးဆိုင် 🍁 ဆပ်သွားသောကျေးရွာ ၊ ညောင်နှစ်ပင်လမ်း ၊ မိန်းမလိုင်းမှတ်တိုင် ၊ 09 796802405 ၊ မှော်ဘီမြို့ ။ 🍄 ထောက်ကြံ့ 🍁 မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 🍁 ထောက်ကြံ့ လမ်းဆုံ ။ 🍄 ဒလ 🍁 အောင်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၁၁၈၅ ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်း ၊ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ၊ 09 43050011 ။ =============================== 🔔 မန္တလေး မြို့နယ်အတွင်း ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ 🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 SKY LARK Shop ( ပင်ရင်း ) 💧 ရန်ကင်းလမ်း သွယ် ၊ မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ နန်းရှေ့ ။ 🎈 ၁၁ လမ်း 💧 ပြည်ကျော်ဟိန်း ဆေးဆိုင် 💧 ၈၇ လမ်း ။ 🎈 ၁၄ လမ်း 💧 စိန်သန်းကြွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 🎈 ၁၅ လမ်း 💧 ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်းထောင့် ။ 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ - ၈၇ ကြား ။ 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဂြိုလ်တု ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 နေမျိုး (၁) ဆေးဆိုင် 💧 ဘောလုံးကွင်းဘေး ၊ နန်းရှေ့ ။ 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 အောင်မေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံရှေ့ ။ 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 G - One 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ၊ 02 2844107 ။ 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 စန္ဒီ ဆေးဆိုင် 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ။ 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 အားမာန်သစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၉ - ၉၀ ကြား ။ 🎈 ၂၇ လမ်း 💧 ဂွတ်ချွုိက် ဆေးဆိုင် 💧 ၆၃ x ၆၄ ကြား ။ 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 Singapore ဆေးဆိုင် 💧 ၈၂ - ၈၃ ကြား ။ 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကိုဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇၅ - ၇၆ ကြား ၊ 09 33109535 ။ 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကောင်းသန့် မြန်မာဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ - ၈၄ ကြား 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 09 963188928 ။ 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 စိန်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ။ 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးဆိုင် 💧 ၇၄ - ၇၅ ကြား ။ 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 Pwint Pwint ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ၊ 09 91009677 ။ 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 သီတာနွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၂ - ၈၃ ကြား ။ 🎈 ၃၂ လမ်း 💧 Mandalay ဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ - ၈၄ ကြား ၊ 09 444046564 ။ 🎈 ၃၂ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ x ၈၄ ကြား ။ 🎈 ၃၅ လမ်း 💧 KL ဆေးဆိုင် 💧 ၇၃ - ၇၄ ကြား ။ 🎈 ၃၇ လမ်း 💧 စွမ်းထက်အောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၆ ထောင့် ၊ 09 977250739 ။ 🎈 ၃၈ လမ်း 💧 ဇွဲသစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်း ဒေါင့် ။ 🎈 ၄၁ လမ်း 💧 စိန်တိုက် ဆေးဆိုင် 💧 ၄၁ လမ်းအောက် ၊ မိုးကောင်းကျောင်း တောင်ဘက် ။ 🎈 ၅၅ လမ်း 💧 အောင်စည် ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ နှင့် မြတ်လေးလမ်းကြား ၊ 09 950127197 ။ 🎈 ၅၅ လမ်း 💧 အောင်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 09 91012456 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 San Phyo ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 09 972776598 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်း ဆေးဆိုင် 💧 02 5154737 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ နှင့် ခိုင်ရွှေဝါ ကြား ၊ 09 793031955 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 နေမျိုး ဆေးဆိုင် 💧 ၃၅ လမ်းထောင့် ၊ 09 257800620 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ။ 🎈 ၆၂ လမ်း 💧 လေပြေ ဆေးဆိုင် 💧 သဇင် နှင့် ငုဝါ လမ်းကြား ၊ ကုတင် 300 ရှေ့ ။ 🎈 ၆၂ လမ်း 💧 အောင်ကျော် ဆေးဆိုင် 💧 စွယ်တော်လမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား ၊ အရိုး အကြော ရှေ့ ။ 🎈 ၆၄ စံပြလမ်း 💧 အောင်သရဖူ ဆေးဆိုင်💧 စက်မှု ၊ 02 5153031 ။ 🎈 ၆၅ လမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ဒေလီယာ လမ်းထောင့် ၊ 09 963699799 ။ 🎈 ၆၆ - ၆၅ ကြား 💧 နေလ ဆေးဆိုင် ၁ 💧 မနော်ဟရီ ။ 🎈 ၆၈ လမ်း 💧 အင်ကြင်းခိုင် ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ နှင့် ခိုင်ရွှေဝါ ကြား ၊ 09 969254532 ။ 🎈 ၆၉ လမ်း 💧 တိမ်လွှာ ဆေးဆိုင် 💧 ၄၁ - ၄၂ ကြား ။ 🎈 ၆၉ လမ်း 💧 ရွက်နု ဆေးဆိုင် 💧 ၃၆ - ၃၇ ကြား ၊ မဟာမြိုင် လမ်းမကြီး ။ 🎈 ၇၃ လမ်း 💧 ရွှေဘုန်းပွင့် ဆေးဆိုင် 💧 ၃၇ - ၃၈ ကြား ၊ ဧရာဝတီဘဏ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ။ 🎈 ၇၅ လမ်း 💧 ဦးဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၂၇ - ၂၈ ကြား ။ 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 မင်းထက် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၈ ကြား ၊ စည်သာလမ်း ။ 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 ရာပြည့်ကျော် ဆေးဆိုင် 💧 ၁၀ - ၁၁ ကြား ၊ အနောက်ပြင် ။ 🎈 ၇၈ လမ်း 💧 မြင့်မြတ်မောင် ဆေးဆိုင် 💧 ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ၊ တံခွန်တိုင် အဝိုင်းမြောက်ဘက် ၊ 09 258881991 ။ 🎈 ၈၁ လမ်း 💧 ရွှေဒေါင်း ဆေးဆိုင် 💧 ၃၉ - ၄၀ ကြား 🎈 ၈၆ လမ်း 💧 ဝင်းအောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၄၁ x ၄၂ ကြား ၊ စိန်ပန်း ၊ 09 777831163 ။ 🎈 ကျန်စစ်သားလမ်း 💧 ရှိုင်းနောင်နောင် ဆေးနှင့် ကုန်စုံဆိုင် 💧 ၆၈ - ၆၉ ကြား ၊ ပြည်ကြီး တခွန် ၁ ရပ်ကွက် ။ 🎈 ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းအရှေ့ 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 09 787382456 ။ 🎈 စက်မှု စံပြလမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ၆၂ - ၆၃ ကြား ။ 🎈 စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း 💧 ဒေါ်လာ ဆေးဆိုင် 💧 ကန်တော်ကြီး လမ်းခွဲ မြောက်ဘက်၊ ရွှေကံကော် မွေ့ယာ ဆိုင်ရှေ့ ။ 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 ပါရမီ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ 09 43015322 ။ 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 အောင်ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ အက်ဒီသင်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မြောက်ဘက် ၊ 09 790130803 ။ 🎈 တိုက်တန်း 💧 ငြိမ်းချမ်း ဆေးဆိုင် 💧 အမှတ် ၂၃ ၊ ဘူတာ ၊ 09 798935379 ။ 🎈 မတ္တရာ လမ်း 💧 Life ဆေးဆိုင် 💧 ဂေါက်ကွင်း မြောက်ဘက် ။ 🎈 မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းမ 💧 ပြည်ကျော်ကြား ဆေးဆိုင် 💧 လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် နှင့်တွဲလျက် ၊ အုန်းချော ၊ 09 2216489 ။ 🎈 သခင်ဖိုးလကြီးလမ်း 💧 ပွင့်ဆန်း ဆေးဆိုင် 💧 ၆၃ - ၆၄ ကြား ၊ စက်မှုဈေး တောင်ဘက် ။ 🎈 အမရပူရ 💧 မိုးမခ ဆေးဆိုင် 💧 09 963238000 ။ 🎈 ဈေးချို 💧 Thabarwa 💧 09 91035690 ။ ================================ အခြားရရှိနိုင်သော မြို့ များ ♦️♦️Other Townships 🍄 ပုသိမ် 🍁 ပါဝါ ဆေးဆိုင် 🍁 E 53 ၊ ကေမင်းညိုလမ်းမကြီး ၊ 09 422496695 ။ 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုသူ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၆၀ ၊ ရှင်ပင်ဖုန်းပွင့်လမ်း ၊ မြို့သစ်ဈေးရှေ့ ၊ 095202099 ။ 🍄 ဟသာင်္တ 🍁 ကိုကြည်ဝင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(၂) တိုင်းရင်းဆေးခန်း ။ ပဒေသာ ဈေးကြီး ရှေ့။ မန်းဘခိုင် လမ်း ။ 09 771126372 🍄 ကွမ်းခြံကုန်း 🍁ရာပြည့် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၉၁ ၊ သုံးပန်လှလမ်း ၊ ဈေးပိုင်း ၊ 09 790138153 ။ 🍄 ကလေး 🍁ကိုဖိုးတုတ်🍁 09 420781165 ။ 🍄 ကလေး 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 073 - 21288 ။ 🍄 ကျိုက်ထို 🍁 ဖိုးလပြည့် ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးအနီး ၊ ကျောင်းရှေ့ ။ 🍄 ကျိုက်ထီးရိုး 🍁 ရင်ရင်ပြုံး ထမင်းဆိုင်🍁 🍄 ကျိုင်းတုံ 🍁ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 5250497 ။ 🍄 ချင်းရွှေဟော (လောက်ကိုင် အနီး) 🍁 နှင်းဧကရီ ဆေးဆိုင် 🍁 09 259665821 ၊ 09 256034838 ။ 🍄 စစ်ကိုင်း 🍁ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးလမ်း နှင့် ချင်းစုကျောင်း ဒေါင့် ။ 🍄 စစ်ကိုင်း 🍁 မင်းမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 🍄 စစ်တွေ 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 09 421744844 ၊ 09 36124601 ၊ 09 250149102 ၊ 09 421745043 ။ 🍄စဥ့်ကိုင် 🍁 လမင်းသာ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မ ရပ်ကွက် ။ 🍄ဇီးကုန်း 🍁 ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် 🍁 ထန်းတပင် ၊ 09 402595354 ။ 🍄 တွံတေး 🍁 ဦးဝေယား ဆေးဆိ်ုင် 🍁 အမှတ် ၂၆ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ 09 420072552 ။ 🍄 တပ်ကုန်း 🍁 ကိုမျိုးသူအောင် 🍁 ph - 09 440099412 ။ 🍄 တာချီလိတ် 🍁 BBB ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 428351135 ။ 🍄 ထန်းတပင် 🍁 ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် 🍁 🍄 ထားဝယ် 🍁 အောင် ဆေးခန်း 🍁 09 258122762 ၊ 09 25083321 ။ 🍄ကြံခင်း 🍁ရွှေယမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၅၆ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ 09 798430446 ။ 🍄 ဒလ 🍁 အောင်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၁၁၈၅ ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်း ၊ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ၊ 09 43050011 ။ 🍄 ပခုက္ကူ 🍁ဦးစိုးလွင် 🍁 Ph - 09 43206401 ။ 🍄 ပန်းတနော် 🍁 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 🍁 ဆိုင်ခန်း အမှတ် ၁ ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ 04630414 ။ 🍄 ပလိပ် 🍁 ကောင်းဆု ဆေးဆိုင် 🍁 ပလိပ် ကားဆိပ်နှင့် သံလမ်းဆုံ အနီး ။ 🍄 ပလိပ် 🍁အောင်ကမ္ဘာဖြိုး ဆေးဆိုင် 🍁 ပလိပ် ဈေး နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ။ 🍄 ပဲခူး 🍁 ဌေးလွင် ဆေးစတိုး နာရီစင်ပန်းခြံရှေ့ ။ ၂၈ လမ်း 095351625 ပဲခူးမှ လူကြီးမင်းများ ဤဆိုင် တွင်အဓိကထား ဝယ်ကြပါ ! 🍄 ပဲခူး 🍁 ကျော်ကြားဝေ ( ရှန်တီး ) ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 790154650 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 ပွဲကတော် ဆေးဆိုင် 🍁 မင်္ဂလာရပ် ၊ ph - 067 22658 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 လေလှိုင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 8300424 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား (ဆရာဦးကျော်စိုး ( တဆ-၆၁၃ ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အငြိမ်းစား) 🍁 မိဘရိပ် တိုင်းရင်းဆေးခန်း 🍁 (အကြောအဆစ်နှင့်အထွေထွေရောဂါကု) 🍁အမှတ် ၅/၆၂(၁)၊ သံတိုင် ၃ လမ်း ၊ ရွှေတောင်ကြီးစားသောက်ဆိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ ယောက်သွားအင်းရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား၊ နေပြည်တော်။ ph - 09 448537598 ။ 🍄 ဖျာပုံ 🍁 ထာဝရ ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးရှေ့ ၊ 045 41176 ။ 🍄 ဗန်းမော် 🍁ထွန်းမြန်မာ ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 074 - 51285 ။ 🍄 မြိတ် 🍁 Wai Thinzar Lwin🍁 ဦးသန်းလွင် ၊ အမှတ် ၂၂၅ ၊ (၅) လမ်း ၊ နောက်လယ်ရပ် ၊ 09 776097948 ။ 🍄 မြိုင်မြို့ 🍁 ဆုလာဘ် ဆေးဆိုင်🍁 ( ကိုကျော်မင်းသူ ) ၊ ph - 772592526 ။ 🍄 ဘားအံ 🍁 လန်းဆန်း ဆေးဆိုင် 🍁 Ph - 09 8731397 ။ 🍄 ဘိုကလေး 🍁 နေ၀င်းမောင် ဆေးဆိုင် 🍁 (12/13) ဧရာဝတီ (သင်္ဘောဆိပ်လမ်း) ၊ 09 429759035 ။ 🍄ဘူးသီးတောင် 🍁 ရှုမဝ ဆေးဆိုင် 🍁 09421751451 🍄 မုံရွာ 🍁 ကုမုဒြာ ဆေးဆိုင် 🍁 ကျောက်ကာလမ်း ၊ မီးသတ် တိုက်တန်း ။ 🍄 မုံရွာ 🍁 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 🍁 Ph - 071 - 24245 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁ကိုထွန်းသိန်း 🍁 09 421714901 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁 ထွန်းဆေးဆိုင် 🍁 09 421721438 ။ 🍄 မအူပင် 🍁 စောဒေ၀ီ ဆေးဆိုင် 🍁 ဘုရားလမ်း နှင့် တေဇလမ်းထောင့် ၊ 09 5198025 ။ 🍄 မိတ္ထီလာ 🍁 မဟာဆွေ ဆေးဆိုင် 🍁 အရှေ့ပြင်အရပ် ၊ ဒုတိယလမ်းမတော် ၊ ရေစဉ်ကြီးအနီး ၊ 09 777434084 ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း🍁 09 456807704 ၊ 086 21073 ( ဖုန်းဆက်ပြီး သွားဝယ်ပါရန် ) ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၁)🍁 ရုပ်ရှင်ရုံ အနီး မြို့ မရပ် ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၂) 🍁 ပိတ်စွယ် ညောင်ပင်ဈေး အနီး 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူးဆေးဆိုင် (၃) 🍁 ဆေးရုံ ရှေ့🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကောင်းသန့်ဆေးဆိုင် 🍁 ရွှေဘုံသာလမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာ ဈေးရှေ့ ### မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်း ( ကြပ်ပြင် ) ### - 🍁သိန်းသန်း ဆေးဆိုင် 🍁 မီးသတ်အနီး ပန်းမ -🍁 မေတ္တာမွန် ဆေးဆိုင်🍁 ကြပ်ပြင်ဈေး 09 49352335 🍄 မိုးမိတ် 🍁 ကိုကျော်ကောင်းစံ 🍁 ph - 09 453661068 ။ 🍄 မုဒုံ 🍁 မွန်ဦး ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 425261467 ။ 🍄 မကွေး 🍁 တူးတူး ဆေးဆိုင် 🍁 တိုင်းဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် ၊ 09 401556740 ။ 🍄 မကွေး 🍁 အာရောဂျံ ဆေးဆိုင် 🍁 ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှေ့ ။ 🍄 မကွေး 🍁 နိုင်လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ရန်ပယ်ဈေး ၊ အပြင်ဘက်(၂)ထပ်တိုက်တန်း ။ 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 SB ဆေးဆိုင် 🍁 ပါရမီ မလိုင်မုန့်ဆိုင် ဘေးလမ်းကြားထဲ ။ 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 စုပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 🍁 ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ။ 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 ဖိုးလမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် ဒေါင့် ၊ 09 444042715 ။ 🍄 ပြည် 🍁 ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 09 5311961 ။ 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 မြတ်မွန် ဆေးဆိုင် 🍁 ဝင်းသူဇာရှေ့ ၊ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး ။ 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ရှိန် ဆေးဆိုင် 🍁 ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် ။ 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ဦးသန်းနိုင် 🍁 Ph - 09 43021786 ။ 🍄 မြန်အောင် 🍁 ပြည်မြန်မာ ဆေးဆိုင် 🍁 ( ဒ - ၂ ) နေခြည်ဈေး ၊ 09 975557177 ။ 🍄 မြဝတီ 🍁 ရဲမွန် ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 786644412 ။ 🍄 လက်ပံလှ (စဥ့်ကူး) 🍁 အာကာကြည် ဆေးဆိုင် 🍁 မိုးကုတ် - မန္တလေး လမ်း ၊ 09 974415452 ။ 🍄 လပွတ္တာ 🍁 ဦးပေါ်လွင် အပ်ချူပ်ဆိုင် 🍁 ဆိုင်အမှတ် ၂၀ ၊ ဘုရားလမ်း ၊ မြို့မဈေးထိပ် ၊ 09 252185212 ။ 🍄 လွိုင်ကော် 🍁 မန္တလေး ပင်ရင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 41007968 ။ 🍄 လှည်းကူးမြို့ 🍁 ဧရာဝတီ ဆေးဆိုင် 🍁 ရန်ကုန်-ပဲခူး လမ်းမကြီး ၊ ရိပ်သာမှတ်တိုင်အနီး ၊ 09 262921365 ။ 🍄 လားရှိုး 🍁 ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 09 36033309 မကြည်ပြာသိန်း - 09 788273496 🍄 ဝါးခယ်မ 🍁 မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 🍁 ဆေးရုံရှေ့ မြူရုံးလမ်း ၊ 09 425438787 ။ 🍄 သထုံ 🍁 ဒေါ်ညို ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 057 - 40370 ။ 09 975457972 ။ 09459551166 အမှတ် အလယ်တန်းလမ်း ၊ အောက်ကြေးရပ်ကွက် ။ 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁ကိုဖြိုး ( ကိုယ်စားလှယ် )🍁 09 400998996 ။ 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁 နောင်ဘိုအောင် 🍁 ( ရွှေပြည်အေးမြို့ ၊ နောင်ဘိုအောင် ၊ နမ့်တော့ မှာလည်း ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါသည် ) 🍄 အိမ်မဲ 🍁 သစ္စာအောင် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၃၁ ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ 09 775705900 ။ 🍄 ကော့မှူး 🍁 အာယုပါလ ပရဆေးနှင့်ဆေးမျိုးစုံဆိုင် 🍁 စည်ပင်ဈေး ၊ 09 763637676 ။ 🍄 ကော့သောင်း 🍁 စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် 🍁 059 51838 ။ 🍄 ကျောက်မဲ 🍁 မင်းမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၅/၅၄ ၊ ပင်လုံလမ်း ၊ ဗဟိုဈေး အနောက်တောင် ဒေါင့် ၊ 09 785081236 ။ 🍄 ကျောက်ဖြူ 🍁 ကိုကျော်ကျော်မိုး 🍁 09 43619044 ။ 🍄 ကျောက်တော် 🍁 ကိုလှဌေး 🍁 09 421760820 ။ 🍄 တောင်ငူ 🍁 ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 09 5352206 ၊ 09 797951343 ။ 🍄 တောင်ကြီး 🍁 ဇွန် ဆေးဆိုင် 🍁 အေးသာယာ GTI သွားသည့် လမ်းမပေါ် GTI မရောက်ခင် ။ 🍄 တောင်ကြီး 🍁 မြတ်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ။ 🍄 တောင်ကြီး 🍁 လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး ။ 🍄 တောင်ကြီး 🍁 တော်ဝင် ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး ။ 🍄 ထောက်ကြံ့ 🍁 မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 🍁 ထောက်ကြံ့ လမ်းဆုံ ။ 🍄 နေပြည်တော် 🍁 ထွန်းထွန်းဆေးဆိုင် 🍁 သပြေကုန်းဈေး ။ 🍄 နေပြည်တော် 🍁 က္ကုစာသာယ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေး ။ 🍄 ပေါက်တော 🍁 ဦးစောထွန်းစိန် 🍁 09 4217556380 ။ 🍄 ပေါင် 🍁ကာသား ဆေးဆိုင် 🍁 🍄 မှော်ဘီ 🍁 နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဆတ်သွားတော ၊ မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ။ 🍄 မှော်ဘီ 🍁 မိုးစတား ဆေးဆိုင် 🍁 ဆပ်သွားသောကျေးရွာ ၊ ညောင်နှစ်ပင်လမ်း ၊ မိန်းမလိုင်းမှတ်တိုင် ၊ 09 796802405 ၊ မှော်ဘီမြို့ ။ 🍄 မောင်းတော 🍁 ARF -4ဆေးဆိုင် 🍁 09 49658034 ။ 🍄 မော်ကျွန်း 🍁 ဇာနည် ဆေးဆိုင် 🍁 ၂၂-၂၃-၂၄ / အောင်ဆန်းတိုက်ခန်း ၊ မြို့မဈေးကြီး ၊ မော်ကျွန်းမြို့ ၊ 09 790224912 ။ 🍄 မော်လမြိုင် 🍁 ဦးမောင်ထူး ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 057 25966 , 057 25960 , 09 5320921 ။ 🍄 မြောက်ဦး 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 09 773110317 ။ 🍄 မြောင်းမြ 🍁 ဂျီကိုကို ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၂၁၃ ၊ ဦးဘချိုလမ်း ၊ 09 428576744 ။ 🍄 ရေစကြို 🍁 ကိုထွန်းအောင်ကျော် 🍁 09 259728485 , 09 797799099 , 09 444744007 ။ 🍄 ရွှေဘို 🍁 ဂရိတ် ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 979277574 ။ 🍄 ရွှေဘို 🍁 ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 075 21118 , 09 259142367 ။ 🍄 ရွှေဘို 🍁 ရူဘီ ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 075 - 21118 ။ 🍄 အောင်ပန်း 🍁 စုမြတ် ဆေးဆိုင် 🍁 ph - 09 73501633 ။ 🍄 နွားထိုးကြီး 🍁 ကိုကျော်ဇင် ဆေးဆိုင် 🍁 09 420704527 ရှမ်း ချယ်ရီမြေ မှ လူခန့် ကြီးများ အကြိုက် " ပါဝါ ဟန်းနီး " 12 Mar 2019 · 13M views
နားမ​ထောင်​ရ​သေး​သောသူများအတွက်​ မျက်​ရည်​သိမ်းလို့စိမ်းလိုက်​ပါ သရုပ်​​ဆောင်​ - ခန့်​​ဇော်​ ကြယ်​ဖြူရှင်းသန့်​ သြဇာသီး
နားမ​ထောင်​ရ​သေး​သောသူများအတွက်​ မျက်​ရည်​သိမ်းလို့စိမ်းလိုက်​ပါ သရုပ်​​ဆောင်​ - ခန့်​​ဇော်​ ကြယ်​ဖြူရှင်းသန့်​ သြဇာသီး ထူးခြားဘူးသား Khant Zaw 13 Dec 2017 · 3.9K views
idhayathai thirudathe siva sahana romance episode 558shiva sahana romantic episodeအ​မေရိကန်​ဖူးကားsexxxxyyyy video 2020 youtube video tik tokcute fight of idhayathai thirudatheမြန်မာအတွဲချောင်းရိုက်Deathnote ep 31valentines day special episodes of idhayathai thirudathekolej günlüğü 5.bölüm full izleotha nilava atha magala mp3 song download当为你的归宿预备足够的善行diwali special episodes of idhayathai thirudatheသက်​မွန်​မြင့်​လိုးကားanimaisgrupo telegram caldo de polloမြ်​မာ​အောကားlove propose scenes of idhayathai thirudathefight scenes of idhayathai thirudatheတရုပ်​ဖူးကားwww.six.edunet.tn 2019